မထင်မှတ်ဘူး – Grab Love Story
by phyu May 22, 2021
မြောက်ဥက္ကလာကိုပြန်သော မီနီဘက်စ်လေးထိုးရပ်လာတော့ လူအုပ်ကြီးနဲ့အတူ မသီတာလဲကားပေါ်တိုးတက်လိုက်ရသည်။ အရမ်းကြီးမကျပ်သော်လည်း လူအပြည့်နှင့်ပင်။ ဒါတောင် စနေနေ့နေ့လည်ခင်းပဲရှိသေးသည်၊ ရုံးဆင်းချိန်ဆိုလျှင်ကားပေါ်တက်ဖို့တောင်မန
ည်း။ သီတာက ရန်ကုန်မှာအလုပ်လာလုပ်တာ ၃နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ ရန်ကုန်ပါးဝနေပြီဆိုပါတော့။ သူတို့နားက ကုန်စုံဆိုင်မှလုပ်ရင်းတဖက်က ပွဲစားတောင်လုပ်နေပြီး သူတို့မြောက်ဥက္ကလာ အဝိုင်းကြီးထိပ်နားမှာတင် သူပွဲစားလုပ်ပေးထားတာ တော်တော်များပြီ။ ဒီနေ့လည်း မြို့ထဲမှာ အိမ်ရောင်းမယ့်သူရှိလို့စကားပြောပြီး ပြန်လာတာ။
ရေခဲဆိုင်နားရောက်တော့ လူတစ်အုပ်တက်လာပီး အတော်ကျပ်သွားသည်။ မတ်တပ်ရပ်သူတွေနှစ်တန်းကနေ သုံးတန်းဖြစ်သွားသည်။ သူ့နောက်မှာတော့ ခုနကသူ့ကိုကွတ်ကြည့်ကွက်ကြည့်လုပ်နေသည့်ကောင်လေးတစ်ယောက်၊ အမူးသမားတွေ ကုလားတွေနဲ့စာရင်တော့ တော်သေးတာပေါ့ဟုတွေးသည်။ ရန်ကုန်မှာဘက်စ်ကားစီးရင်ဒီလိုပဲ မသီတာလိုအိုးကောင်းကောင်းမျိုးဆိုလျှင် အထောက်ခံဖို့သာပြင်ထားပေတော့ပဲ၊ ကံကောင်းတာတစ်ခုက သူကလဲကြိုက်တယ်လေ။
ယောကျာင်္းနဲ့အနေဝေးနေတဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုကိစ္စဖြစ်လာရင်သူမအတွက် ဖြေရှင်းစရာနှစ်နည်းပဲရှိတယ်။ တစ်နည်းက သူနှင့်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ငြိထားသော သူ့ကုန်စုံဆိုင်သူဌေး ဦးအောင်မိုး၊ သူကတော့ သူမကိုတွေ့လျှင်ငန်းငန်းတက် ပြောတာတော့ သူ့သမီးအကြီးမကြီးနဲ့တူလို့သူ့စိတ်ထရပါသတဲ့ ကဲ။ အဖိုးကြီးဖြစ်လို့သိပ်ဆန္ဒမပြည့်ဝသလို သူလဲသိပ်ဖီလ်းမလာ၊ သူအဖိုးကြီးဆီမသွားကြာပြီ။ နောက်တစ်ခုက ခုလိုကားပေါ်ကရသေ့စိတ်ဖြေလေးတွေ၊သူတို့က ကားစီးနေရင်း ကားပေါ်မှာထောက်ရင်းဖီလ်းခံ၊ သူမက သူ့ဖင်ကြားထဲလာထောက်နေတဲ့ လူရဲ့ဆိုဒ်ကိုမှန်းပြီးဖီလ်းတက်၊ မှတ်တိုင်ရောက်တော့ သူ့လမ်းသူသွး ကိုယ့်လမ်းကိုသွားပဲ ရှင်းတယ်၊ ဘယ်သူမှမသိဘူး။
ဟိုတခေါက်ကတော့ သူ့ဖင်ကြားထဲ နွေးနွေးထွားထွားကြီးလာထောက်ထားတော့ ရင်ခုန်လှည့်ကြည့်လိုက်တာ စတီးထမင်းချိုင့်လေးဖြစ်နေလို့ ရီရသေးတယ်၊ တစ်ခါတလေ ကုလားတွေလာထောက်ရင်တော့ သူမကြိုက်ပေ။ မသီတာမှ အချောအလှကြီးတော့မဟုတ် ရိုးရိုးသာမန်မိန်းမ အသက်၃၆ အိမ်ထောင်ရှိ ရွှေတောင်သူ အကိတ်တစ်ယောက်။ အသက် ၃၆ကလေးတစ်ယောက်အမေဆိုတော့ ဗိုက်ခေါက်လေးမဆိုစလောက်ရှိတာကလွဲပြီး ကျန်တာကတော့သရေယိုစရာ ဆိုတော့ကာ ကားပေါ်ရောက်လျှင် အထောက်ခံရသမြဲ။
ရုတ်တရက် လူတွေပြန်ဆင်းသွားတော့နဲနဲပြန်ချောင်သွားသည်၊ သို့သော် သူ့နောက်က ကောင်လေးကမခွာသေး။ လူက နှစ်ဆယ်လောက်ပဲရှိဦးမယ်၊ အောက်ကပူပူနွေးနွေးလေးကလဲ ထာက်ထားတာက ကလေးလိုပဲ။ အင်း ခလေးတွေအတက်ကောင်းတွေတက်နေတာ။ သူ စချင်နောက်ချင်စိတ်နှင့် သူ့ဖင်ကိုမသိမသာ အနောက်နဲနဲတိုးပွတ်ပေးလိုက်တယ်။ ကောင်လေး မျက်လုံးပြူးသွားတယ်ထင်တယ် တခြားလူတွေဆို ပိုကပ်လာမယ်ဖြစ်သော်လည်း ကောင်လေးကတော့အနောက်လဲနဲနဲပြန်ဆုတ်သွားတယ်။
ခနနေတော့ ပြန်လာကပ်သည်၊ လက်ကိုလဲ အပေါ်တန်းကိုင်လိုက် ပြန်ချလိုက်နဲ့ သူဖင်နဲ့မထိ ထိအောင်လုပ်နေတာ စိတ်မရှည်ချင်စရာဖြစ်သည်။ သူ့ရှေ့ထိုင်ခုံက လူဆင်းသွားပြီး မသီတာထိုင်လိုက်တော့ ကောင်လေးကဘေးမှာလာရပ်သည်။ မော့မကြည့်သော်လည်းသေချာတာကတော့ သူမအကျီလည်ဟိုက်ထဲမှ တစွန်းတစပေါ်နေသောသူမရင်သားတွေကိုငုံကြည့်ပီး စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီထင်၏၊ လက်မောင်းကိုလာကပ်သောသူ့ပေါင်ကြားမှာ နွေးနွေးကြီးကမာလာသည်။
မှတ်တိုင်မှာလူတွေထပ်တက်ရ်ျ ခါးပိုက်နှိုက်ရန်ကြောက်သလို သူ့ကျောပိုးအိတ်ကိုအရှေ့မှာပြောင်းလွယ်ပီးကိုင်ထားလေတော့ လူတိုးရင် သူ့လက်လေးက မသီတာနို့အုံနားရောက်ရောက်လာသည်။ ဒီကောင်လေးအကြံဥာဏ်များပြီထင်သည်။ မော့ကြည့်လိုက်တော့ တကယ်ကလေးချောလေး အသားဖြူဖြူမှာ မျက်နှာနဲနဲနီနေသည်။ မသီတာကလေးကိုစချင်လာသဖြင့် မသိမသာ ရင်ကိုပိုမောက်လိုက်ပြီး သူ့ဘက်နဲနဲကပ်ပေးလိုက်တော့ သူ့လက်လေးနဲ့ထိမိသွားတယ်၊ သူကကိုယ့်ကိုလာထိတာမဟုတ် သူလက်ကိုကိုယ့်နို့နဲ့သွားထိတာဆိုတော့ ကောင်လေး လန့်သွားသည်ထင်သည်။ ချွေးတွေဘာတွေထွက်လာတာမြင်ရတော့ မသီတာရီချင်လာသည်။
သူနိုင်လို့ရလောက်သည့်အရွယ်မို့ရော၊ သူထိကြည့်ချင်တာ ထိကြည့်ပါစေဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ရော မသိချင်ယောင်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။
(ကောင်လေးက အတွေ့အကြုံမရှိအသစ်လေးဖြစ်သော်လည်း အတောင့်စားအမကြီးတစ်ယောက်က ပေးတာကိုကြောက်ကြောက်နဲ့ယူရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေသည်။ သူ့မှာ ဒီနို့ကြီးတွေကို ထိလဲထိကြည့်ချင် အော်လိုက်မှာလဲကြောက်နှင့် ချွေးတွေပင်ထွက်လာရသည်။ အထိအတွေ့ကတော့ ဘာကောင်းသလဲမမေးနှင့် သူဖြေတက်မှာမဟုတ်။)
လူတွေတိုးတော့ အရှေ့ကိုင်းသလိုလိုဘာလိုလိုနှင့် မသီတာရင်အုံတစ်ခုလုံးကိုလာထိသည်။ အဲ့လောက်မရဲဟုထင်ထားသော မသီတာမှာ အံ့သြရသည်၊ ကိုယ်ဟန့်ဖို့ပြန်လုပ်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း ကောင်လေးရှက်သွားမှာ ကောင်လေး မျက်နှာညှိုးသွားမှာ စိုးသဖြင့်ရော မသိသလိုသာနေပေးလိုက်တော့သည်။ သူ့ယောင်္ကျားကိုင်သလို တစ်အုံလုံးကိုင်တာမှဟုတ်တာ နို့ဘေးသားလေးကိုလက်နဲ့ထိရုံပဲဥစ္စာ ဘာဖြစ်လဲ၊ ဒီကောင်ချောလေးကျေနပ်တာကို သူပျော်နေသလိုခံစားရသည်။ ဒီအသက်အရွယ်ရောက်မှ ကောင်လေးစိတ်ဝင်စားခံရရ်ျ စိတ်လှုပ်ရှားတာလဲဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီကောင်လေးကလဲ အတော်ရောင့်ရဲသည် ဒီထက်ဘာမှပိုမတက် ခုနအတိုင်း ထိထားရုံလေးနဲ့ငြိမ်နေသည်။ ခဏကြာတော့ လူတွေချောင်သွားပီး သူ့ဘေးကလူလဲဆင်းသွားတော့ သူဘေးရွှေ့လိုက်ပီး ကောင်လေးကိုပြုံးပြပြီး ဝင်ထိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်မိသည်။
အဲ ဟို မြောက်ဥက္ကလာပါ (ကောင်လေးမျက်နှာချွေးပြန်နေပီ)
ဟင်းဟင်း မောင်လေးက မြောက်ဥက္ကလာမှာနေတာလား
သြော် … ကျောင်းတက်နေတာလား
အမှန်တော့ ကောင်လေးကိုသူစကားပြောချင်ရ်ျသာစကားတွေဆက်များနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကောင်လေးက ဆက်ကန်းရီးယားကွန်ပြူတာဖြစ်ကြောင်းပြန်ဖြေပီး သူတို့စကားတွေဆက်သွားသည်။ ဒီလိုကောင်အထက်တန်းစားကောင်ချောချောလေးနဲ့ စကားဖောင်ဖွဲ့နေရတာမသီတာပျော်သလိုဖြစ်နေသည်။
အင်း ပါတယ် အမဆင်းတော့မယ်နော် မင်းရော
မသီတာအရှေ့ထွက်သွားသည်၊ စိတ်ထဲတော့သိပ်မသင်္ကာ ခုနကတော့ မရေမရာပြောပြီး ခုဆင်းတော့ သူနဲ့တစ်မှတ်တိုင်တည်း။ တိုးဆင်းကြတော့ သူ့နောက်ကခပ်နွေးနွေးတစ်ချောင်းက ကောင်လေးဖြစ်ဖို့များတယ်လို့သူတွေးလိုက်သည်။ ကားအောက်ရောက်တော့
အဲ . . . လိပ်စာကပျောက်သွားပီအမရဲ့ အဒေါ်ပြောတာက မှတ်တိုင်နားမှာပဲတဲ့
နာမည်က အဲ ဒေါ်မြခင်တဲ့ ကွမ်းယာဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ပြောတာပဲ၊ ကျွန်တော်လဲအနီးအနားလိုက်ကြည့်ပီး မတွေ့ရင်ပြန်မှာပါ
အင်း . . . . အကူအညီလိုရင်ပြောနော် အမက ဒီမျက်နှာခြင်းဆိုင်နားကတိုက်မှာနေတာ ဝင်လည်ပေါ့
ကျေးဇူးနော်အမ . . . ဟို ရေလေးတခွက်လောက်သောက်ပီးမှ သွားရှာမလားလို့
ဒီကောင်လေး သူ့ကိုတော့စိတ်ဝင်စားနေတာသေချာပီ ဒီအရွယ်ကြီးကို၊ သူကလဲဒီကောင်လေးကိုစိတ်ဝင်စားမိပြီမဟုတ်လား။ ဒီကောင်လေးနှင့်ထပ်ပတ်သတ်ချင်သေးရ်ျ အိမ်သို့အလည်ခေါ်သွားလိုက်သည်။
အင်းလေ . . . အမအိမ်မှာရေလိုက်သောက် ပီးမှရှာပေါ့
ဟာ ကျေးဇူးဗျာ အမကသိပ်လှသလို သဘောလဲသိပ်ကောင်းတာပဲနော်
အမယ် မောင်လေးက မြှောက်တက်သားပဲ ဟင်းဟင်း ပြောဇမ်းဘာစားချင်လို့လဲ
အာ အမကလဲ တကယ်ပြောတာပါ
ကဲ အမကဘယ်မှာလှလို့လဲ တောသူကြီးကို
အာ အဲလိုမပြောပါနဲ့ဗျာ ကျွန်တော့မျက်လုံးထဲမှာတော့ အမကသိပ်ကိုလှပါတယ်
အတည်ကြီးပြေနေတာ၊ မသီတာတောင်ရှက်သွားတယ်။ ဖြူဖြူနုနုကောင်လေးက သူ့ကိုလှတယ်ဆိုတော့ သူမသိပ်ကျေနပ်သွားသည်။
ကဲ အပြောလေးတွေလျှော့ ဒီတိုက်ပဲ အပေါ်ရောက်မှမင်းစားချင်တာကျွေးမယ်
ဗျာ တ ကယ် နော်
ဟဲ့ . . . . သြော် ဒီကလေး
ရှက်ရှက်နဲ့မသီတာပြေးတက်သွားသည်၊ အနောက်ကကောင်လေးကတော့ သူ့ဖင်တုန်းတွေလှုပ်သွားတာကိုကြည့်နေတော့မည်။ မသီတာအခန်းက ဒုတိယထပ်မှာ တံခါးဝရောက်တော့ ဖြူဖြူနုနုနဲ့ပိုးဟတ်ဖြူလေးကို စချင်စ်ိတ်ဖြင့်
ကဲ ရေပဲရမယ်နော် ဒါနဲ့ ရှင်လေးက ဘာစားချင်လို့တုန်း ဟွန်း ဟွန်း
(ကောင်လေးမှာ ရှက်သွားပြီး မျက်နှာကြီးရဲလာသည်) အာ ဟို ရေပါပဲဗျာ တခြားဟာမဟုတ်ပါဘူး အမကိုနောက်တာပါ
ဆိုသော်လည်း သူ့အကြည့်တွေက မသီတာရင်သားတွေမှမခွါ၊ ခက်ပါပြီခလေးရယ်။ အပျိူလေးတစ်ယောက်လို သူမရင်တွေဘာတွေခုန်လို့။
ကဲ ထိုင်ဦးမောင်လေး အမရေသွားယူပေးမယ်
ဒါနဲ့ မောင်လေး နာမည်က
ကျွန်တော်နာမည် အာကာပါ အမကရော
အမနာမည် သီတာ တဲ့ ရော့ရေသောက်လိုက်ဦး
သူ့ဘဝမှာသူ့အမျိုး သူ့မောင်လေးတွေကလွဲပြီး ဒီအရွယ်ချာတိတ်လေးတွေနဲ့မဆက်ဆံဖူး၊ ဒီဖြူဖြူသန့်သန့်ကောင်လေးကို သူစိတ်ဝင်စားသွားသည် ပြီးတော့ ဒီကောင်လေးကလဲ သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဒီအထိရောက်လာတာမဟုတ်လား။ ကောင်လေးကတော့ ရှက်နေတာနဲ့ စမှာမဟုတ် သူကပဲ
ကဲ ခနနားဦး နဲနဲအိုက်တယ် အမအကျီင်္လဲလိုက်ဦးမယ် ပြီးမှ
မသီတာအခန်းထဲဝင်သွားပြီး ကောင်လေးချောင်းချင်ချောင်းလို့ရအောင် တံခါးမပိတ် လိုက်ကာကြားမှမြင်နိုင်သည်လေ။ အပေါ်အင်္ကျီကိုချွတ်လိုက်တော့ သူ့ရင်သားနှစ်ဆိုင်ဟာသိပ်မကြာခင်ကြုံတွေ့မယ့်အရေးအတွက်ကြွားကြွားကြီးစောင့်မျှော်နေကြတယ်။ ဘရာဇီယာကိုချွတ်လိုက်တော့ အို နို့သီးခေါင်းလေးတွေပါထောင်လို့ပါလား။ ထမီတစ်ထည်ကောက်လဲလိုက်ပြီး မှန်ထဲကကြည့်လိုက်တော့ ကောင်လေးခမျာမျက်လုံးကြီးကိုပြူးလို့၊ သူကျေနပ်သွားသည်။ အကျီတစ်ထည်ကောက်ဝတ်မယ်လုပ်တော့ ဘရာဇီယာမဝတ်တော့ပဲ ဒီအတိုင်းအကျီတထပ်တည်းဝတ်ပြီးပြန်ထွက်ခဲ့လိုက်တယ်။
ဒါနဲ့ ငါ့မောင်က လူချောပဲ၊ ကျောင်းမှာဆို စော်တွေဝိုင်းနေမှာ
အာ . . အမကလဲ စော်မရှိပါဘူး
အမယ် ဟုတ်လို့လား ဒီလောက်ချောတဲ့ လူချောလေးကို
အမကတော့လုပ်ပီ နဲနဲပါ အဟဲ အမ မသီတာကမှ တကယ့်မိန်းမလှ
အမယ် တောသူကြီးကို ဘယ်မှလှလို့လဲ မင်းကျောင်းမှာမှ ဆော်လှလှလေးတွေ
ကျတော်တို့မကြိုက်ပါဘူး ပိန်တာရိုးတွေ အမသီတာတို့လို အလုံးအထည်မျိုးမှ တကယ်လှတာ
ပြောပြောဆိုဆို မျက်လုံးက မသီတာရင်သားဆီကမခွာတော့ ကြည့်ရင်း နို့သီခေါင်းကလေးမှာလူကြည့်တော့ထောင်လာသဖြင့် အကျီပေါ်မှမြင်နေရသည်။
ဒါဆိုဒို့က ရုပ်လှတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ ဘော်ဒီကောက်ကြောင်းကလှတာပေါ့ ဟုတ်လား
အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေ ဒီမျက်နှာနဲ့ ဒီဘော်ဒီလိုက်တယ် လှတယ်ပြောတာ
အဲ့လို့ကောက်ကြောင်းလှလို့ မင်းကားပေါ်မှာကပ်နေတာမဟုတ်လား ဟွန့် (မျက်စောင်းလေးနဲ့ညုလိုက်တယ်)
အာ အမကလဲ လူတိုးလို့ပါဗျ
ကောင်လေးမျက်နှာတော်တော်ရဲသွားသည်၊ နောက်တဆင့်ထပ်တင်မှဖြစ်မယ်။ အာကာထိုင်နေတဲ့နားသွားထိုင်ပြီး
အမယ် ဘာလူတိုးလို့လဲ အောက်ကလဲ တောင်နေပီးတော့
အဲ အဲဒါက ဟို ကပ်နေလို့ပါ
ပီးတော့ အမဖင်ကြားထဲကိုလဲ လာထောက်တယ်လေ ဟုတ်တယ်မို့လား
မသီတာစကားကြမ်းကြမ်းပြောလေ့မရှိပါ၊ ရှက်နေတဲ့ကောင်လေးကို ပိုရှက်စေချင်လို့ပြောရင်း သူစိတ်ပိုပါလာသည်။
ဘာအခုမှခေါင်းငုံ့ထားတာလဲ ပြောလေ ဘာလို့ဒို့ဖင်ကိုလာထောက်တာလဲလို့
ဟို ဟို မပြောတက်ဘူး ပြန်တော့မယ်
အမယ် လူကိုကားပေါ်မှာထောက်တုန်းကထောက်ပီး ခုမှဘာပြန်မယ်လဲ မရဘူး ပြော ဘာလို့အမကိုလာထောက်တာလဲ
ဟို ဟို အမစိတ်မဆိုးနဲ့နော် အမှန်အတိုင်းပြောရရင် အမ အဲ ဖင်က သူများတွေထက်လှလို့ ကြီးလဲကြီးလို့ ကျွန်တော်ထောက်မိသွားတာပါဗျာ စိတ်မဆိုးပါနဲ့
ဘာပဲပြောပြောသူ့ဖင်ကိုလှတယ်လို့ပြောတာ မသီတာကျေနပ်သွားပြီး ရှက်လဲရှက်သွားသည်။
စိတ်မဆိုးပါဘူးအာကာလေးရယ်၊ တကယ်လား ဒို့ဖင်လှတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုလှတာလဲ
ကျတော်မပြောတက်ဘူးဗျ သူများထက်တော့လှတယ် လုံးတင်းပြီး ဘောလုံးကြီးလိုပဲ
ဆိုတော့ မောင်လေးက ထိချင် ကိုင်ချင်နေတာလား
ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ အမစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်
ဟင့်အင်း အမှန်တိုင်းပြောရင်စိတ်မဆိုးတဲ့အပြင် မင်းကိုဆုတောင်ချဦးမှာ ကဲပြောပါဦး အာကာကိုင်ချင်နေတာဖင်တစ်ခုတည်းလား
ဟယ် . . ဒို့နို့တွေရောပေါ့ ပြီးရင်ဘာလုပ်မှာလဲ
ကျတော် မပြောတက်ဘူး၊ ဟို အမကိုကိုင်ချင် နမ်းချင်နေတာပဲသိတယ်
ကဲ ရှက်မနေနဲ့တော့အာကာ မင်းကတကယ် ရည်းစားမရှိ မိန်းမမလုပ်ဖူးတာလား
တကယ်ဟုတ်ပုံရပါသည်။ လူပျိုလေးကိုရှင်ပြုပေးရမည်ဆိုတော့ သီတာစိတ်ကြွလာပြီး သီတာကပဲစနမ်းလိုက်သည်ထင်သည်၊ နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုဆက်သွားတော့ အာကာလက်တွေက မသီတာရင်သားတွေဆီမရဲတရဲရောက်လာသည်။ ခုထိရှက်မနေသေးတာ တော်သေးတာပေါ့။ ဒါတောင် မကိုင်ရဲသလိုကိုင်နေသဖြင့် သူမကိုယ်တိုင်ကိုင်ပြလိုက်ရသေးတယ်။ ခြေတုန်လက်တုန်နဲ့ကောင်လေးနှင့်နမ်းနေရတာ မထင်မှတ်လောက်အောင် ရင်ခုန်နေရသည်။ သူ့နို့တွေကိုညှစ်ရဲလာပြီး ပေါင်တွေကိုပွတ်ပေးသည်။ သီတာလဲ သူ့ပုဆိုးအောက်မှထောင်နေတဲ့သူ့ဂျိုးလေးကိုပွတ်ပေးလိုက်တယ်၊ ဟော့တော့
နမ်းနေတာကိုခွါပြီး သေချာပြန်ကြည်ံလိုက်တယ်၊ သူကိုင်လိုက်မိတာဒီကောင်လေးဟာမှဟုတ်ရဲ့လား။
သူထင်တာကဖြူဖြူဖျော့ဖျော့ကောင်းလေးမှာ သေးသေးလေးပဲရှိမယ်ပေါ့ လက်တွေ့တွေ့လိုက်ရတာက ဦးအောင်မိုးထက်ကြီးပြီး သူ့ယောကျာင်္းနီးပါးလောက် တောင်မတ်နေတာနေတဲ့သူ့အရွယ်အစားကိုသဘောကျသွားတယ်။ ဂွင်းတော်တော်ဆော့တယ်ထင်တယ်။ သူကျေနပ်သွားပြီး ပုဆိုးဆွဲချွတ်လိုက်တယ်၊ သူ့အကျီကိုလဲချွတ်ပေးလိုက်တော့ အာကာမှာ သူ့နို့ကြီးတွေကို ကိုင်ကြည့်ညှစ်ကြည့်လုပ်နေသေးရ်ျ စို့ခိုင်းလိုက်ရသေးသည်။ သူကတော့ ကောင်လေးလီးကိုမြတ်မြတ်နိုးနိုးဆုပ်ကိုင်ပြီး ကွင်းတိုက်ပေးနေလိုက်တယ်၊ ခနနေတော့
အာကာ မောင်လေး ဒီမှာကြည့်ဇမ်း
မတ်တက်ရပ်ပြီး ကျန်နေသေးတဲ့သူ့ထမီပါချွတ်ပြလိုက်တယ်၊ အာကာ့မှာ ပါးစပ်အဟောင်းသား
ဒါလေးကော မလိုချင်ဘူးလားခလေးရယ် (သူ့စောက်မွှေးတွေကိုထိုးဖွဆော့ပီးမေးလိုက်တာ)
ပြန်မဖြေနိင်ဖြစ်နေတဲ့ အာကာမျက်နှာနဲ့ပွတ်ပေးလိုက်တယ် အာကာမှာဘာမှမလုပ်တက် ရုပ်ရှင်တွေထဲကိုလျှက်ကြည့်ဖို့လျှာထုတ်လိုက်ပေမဲ့ အမွှေးတွေကိုပဲယက်မိတယ်။ သူသင်ပေးမှရတော့မယ့်ပုံပဲ။
ဖင်ပြောင်ကြီးနဲ့လမ်းလျှောက်သွားတဲ့ မသီတာဖင်ကြီးကိုကြည့်ပြီး အနောက်ကအမြန်လိုက်သွားတယ်။ အခန်းထဲရောက်တော့ ဘာမှမပြောနိုင်ဘူး ကုတင်ပေါ်တင်ပါးလွှဲထိုင်နေတဲ့မသီတာကို နမ်းတယ်၊ သူသဘောကျနေတဲ့ နို့ကြီးတွေကိုလဲ အားရပါးရပင့်ကိုင်တယ်။
မသီတာကလဲ အာကာ့လီးကိုပိုမာတောင်လာအောင်ရှေ့တိုးနောက်ငင်ဂွင်းတိုက်ပေးပီး ပိုမာတောင်လာတော့ မသီတာလဲဂွင်းတိုက်တာရပ်လိုက်တယ်၊ ပို့မယ့်ပို့ကုတို့ရောက်အောင်ပို့ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ကောင်လေးကိုနတ်ပြည်ပို့ဖို့ သူစေတနာအပြည့်နဲ့ ကုန်းစုပ်ပေးလိုက်တယ်။
မသီတာရဲ့လက်နဲ့ ဂွင်းဆွဲပေးနေတုန်းကခံကောင်းကောင်းနဲ့ခံနေတဲ့အာကာဟာ နွေးထွေးစိုစွတ်တဲ့မသီတာရဲ့နှုတ်ခမ်းအရသာနဲ့တွေ့တောင့် အား ခနဲတစ်ချက်အော်လိုက်တယ်၊ နာလို့မဟုတ်ဘူး သိပ်ကျေနပ်သွားလို့။
ရုပ်ရှင်တွေ စာတွေထဲမှာဖတ်ဖူးတွေ့ဖူးပေမဲ့ မသီတာက သူ့ကိုစုပ်ပေးလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားဘူးလေ။ မသီတာလဲ တခါမှဒီလောက်မထန်ဖူးပေမဲ့ ဘာမှမသိတဲ့ကောင်လေးကို ဆရာလုပ်ချင်ဇောနဲ့ သူသိသူတက်တာတွေအကုန်လုပ်ပေးရင်း သူစိတ်ပိုကြွလာတယ်။ သူ့ယောင်္ကျားနဲ့သူတောင်အမြဲမစုတ်ပေးဘူး ဒီကောင်လေးနဲ့မှ သူထန်နေတာကိုလဲ သူအံသြတယ်။
အား . . စူး . . အ မ အား . .
ကောင်လေးပီးချင်နေပီမှန်းသူသိလိုက်တယ်၊ တခါမှအရည်မမြိုဖူးပေမဲ့ ကောင်လေးရဲ့လူပျိုရည်ကိုသောက်ကြည့်ဖို့စိတ်ကူးပီး သူပါးစပ်ထဲကမထုတ်ပေးလိုက်ဘူး။
အား . . အာ . . ကောင်းတယ်အမ အာ ထွက်ကုန်ပီ
သူ့မျက်နှာကိုဆွဲခွါဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ သီတာစုတ်ထားတာကိုမလွတ်ပေးတော့ သီတာ့ပါးစပ်ထဲမှာပဲပီးလိုက်တယ်။ ကောင်လေးအရည်တွေအများကြီးကို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ထုတ်နေတာအတော်ကြာတယ်။ ပီးတော့ သီတာနဲနဲပြို့သလိုဖြစ်ပေမဲ့ ကျေကျေနပ်နပ်မြိုချလိုက်တယ်။
အာ အယ်မ ကန်တော့နော် ကန်တော့
ရပါတယ် မောင်လေးရယ် မင်းကိုချစ်လို့မင်းလူပျိုရည်တွေကိုမြိုချလိုက်တာ
လို့ပြောလိုက်တော့ အာကာချက်ချင်းသူ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုဆွဲနမ်းတယ်။ သူ့နားနားကပ်ပြီးလဲ
ကောင်လေးကချစ်တယ်ပြောလို့ သီတာကျေနပ်သွားတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက် ကုတင်ပေါ်မှာနမ်းရှုပ်ရင်း အာကာက သူကိုင်ချင်နေတဲ့ဟာအကုန်ပွတ်သပ်ကြည့်တယ်။ ပြည့်တင်းနေတဲ့ အိုးကားကားကြီးတွေကို ပေါင်အောက်ကပင့်ကိုင်ညှစ်ဖျစ်တော့ အမွှေးတွေဖုံးအုပ်နေတဲ့ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးဆီလက်ရောက်သွားတယ်။
မင်းကဘာကိုနမ်းမှာလဲ (ပြုံးစိစိနဲ့ သိသိကြီး၊ ဒီကောင်လေးပြောတာကြားချင်လို့တမင်မေးတာ)
အာကာရှက်မနေနဲ့ကွာ ခနကပဲသူ့လီးကိုစုပ်ပေးပီးပီ သူတောင်ဒို့ပါးစပ်ထဲ လရည်တွေပန်းပီးတော့ အခုဘာပြန်နမ်းမှာလဲ
(မျက်နှာရဲခနဲဖြစ်သွားပေးမဲ့) အမ အဖုတ်ကိုလေ
ခစ်ခစ် အင်းသင်ပေးမယ် ပြန်မေးလေ
မနမ်းနဲ့ . . . . . ဒို့စောက်ဖုတ်ကို ယက်ပေး (သီတာလဲအဲ့လိုပြောရတာ အရသာတွေ့လာတယ်)
ပြောပီးတာနဲ့ သူ့ပေါင်တွေကိုကားပေးလိုက်တယ်၊ အာကာလဲတက်သလောက်မှတ်သလောက် ယက်တော့တာပဲ၊ ပေါင်ခြံတွေကိုနမ်းတယ် ဆီးခုံအမွှေးတွေကိုယက်တယ် ပီးတော့ အကွဲကြောင်းကြီးကိုအပေါ်ကနေယက်နေတယ်။ သီတာအသည်းတယားယားဖြစ်နေပေမဲ့ မထိရောက်တော့ အမှန်ကိုသင်ပေးရဦးမယ်။ အာကာ့ခေါင်းကို ဆွဲမလိုက်ပြီး အကွဲကြောင်းလေးကိုလက်ချောင်းနှစ်ချောင်းနဲ့ဆွဲဟလိုက်ပီး
ဒါလေးကိုယက်ရတယ် ခလေးရဲ့၊ (အာကာ့ခေါင်းလေးကိုဆွဲကပ်ပြီးနေရာချပေးလိုက်တယ်)
ဒီအဖုလေးကို စုပ်ပေး အား ဟုတ်တယ် အဲ့လိုမျိုး အားစ်
အာကာကလဲသူသင်ပေးသမျှလိုက်လုပ်တယ်၊ အကွဲကြောင်းကြီးကလဲလျှာနဲ့ယက်တာအောက်ကခရေညိုကြီးအထိပဲ။ သီတာသင်သာသင်ပေးရတယ် တခါမှအယက်မခံဖူးပေ၊ လက်တဖက်ကကောင်လေးခေါင်းကိုကိုင် နောက်တဖက်က နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုချေရင်းကောင်းကောင်းခံစားပစ်လိုက်တယ်။ ဒီကောင်လေးကိုသင်ရင်း သူလိုချင်တာတွေကိုပါလုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်၊ ကောင်လေးက ခရေညိုကြီးပါယက်တော့ သူ့မှာတွန့်ခနဲပဲ။ သူဖ်ီလ်းပိုတက်လာတော့ အာကာ့ခေါင်းလေးကိုထိမ်းကိုင်ရင်း သူ့အဖုတ်အုံကြီးနဲ့ပွတ်ပေးလိုက်တယ်၊ ကောင်လေးမျက်နှာရွှဲသွားတော့ သူပိုလိုချင်တာပီ။ ခုနက တချီပီးထားပေမဲ့ ကောင်လေးဟာကမကျသေးဘူး။
အား ကောင်းလိုက်တာ အာကာရယ် . . . ဟုတ်တယ် အဲ့လို . . . ရပီမောင်လေး ဒို့လိုချင်ပီ
(ယက်နေတာကိုရပ်ပီး သူ့ပေါင်ကြားဝင်တာတယ်) ကျတော် . . လိုးရတော့မှာလား
အင်း ဟုတ်တယ် လိုးရတော့မှာ မင်းလီးကြီးကိုလိုချင်ပီ မင်းလီးကိုဒို့ထဲထည့်လိုက်တော့
အား ဖြေးဖြေးမောင်လေး အင်း
အပေါက်သေချာချိန်ပီး အားနဲ့ထိုးထည့်လိုက်တာ ရုပ်တရပ်ဆိုတော့နာသွားတယ်၊ ကောင်လေးလဲ သူ့ဟာကြီးလို့ဆိုပီးကျေနပ်နေသည်။ ကောင်လေးအတွက်ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံဆိုတော့ အငမ်းမရဖြစ်တော့သည်။ အထနှေးပေးမဲ့ စက်ကသွက်တယ်၊ ကောင်လေးနွားငတ်ရေကျဖြစ်လေ သူသဘောကျလေမဟုတ်လား။ အရှိန်အထိန်းပဲခပ်သွက်သွက်ဆောင့်တယ် ပထမအချီပီးထားလို့နဲနဲကြာတာ၊ နောက်အချီကျရင်တော့ပြောပြမှဖြစ်မယ်။ အာကာအတင်းဆောင့်လေ အစိကိုပွတ်မိတာများပီး သူကောင်းလာတယ် အရည်တွေလဲရွှဲနေပီ။
အားစ် . . . ကောင်းတယ် လိုးလိုး ကောင်းလားမောင်လေး
ကောင်းတယ် အရမ်းပဲ ဟား . . . မနာတော့ဘူး မဟုတ်လား
ဟင့်အင်း . . . ဒို့ကိုအားမနာနဲ့ဆောင့် အား ကောင်းတယ်ခလေးရယ် အင်
ကောင်လေးမကြာခင်ပီးတော့မယ်ထင်တယ်၊ ဆောင့်ချက်တွေသွက်လာသည်။ သူလဲအမြန်လိုက်ပီးမှဖြစ်မယ် အာကာ့ကိုအောက်ကနေပြန်ပင့်ဆောင့်ပေးလိုက်ပီး ခါးကိုစကောဝိုင်းသလိုလုပ်ပေးလိုက်တော့ အဝင်အထွက်ပိုထိသလို နှစ်ယောက်လုံးအတွက်ခံစားမှုဆန်းသစ်စေသည်။ ဆောင့်လိုက်တိုင်း တုန်တုန်သွားသောနို့အုံကြီးကိုဆွဲပြီးဆောင့်သည်။
အား ကောင်းလိုက်တာအမသီတာရယ် ရီုး ထွက်တော့မယ်
လိုးမောင်လေး လိုး ဒို့လဲကောင်းတယ် ပီးချင်ပီ အားစ်
သူတို့နှစ်ယောက်လုံးပြိုင်တူပီးသွားသည်၊ မသီတာ ပီးနေတုန်း အာကာ့ဖင့်ကိုကိုင်ပီး
ကပ်ညှောင့်ပေးလိုက်တော့ အရမ်းကောင်းသွားတယ်။ ပူနွေးနေတဲ့ယောနီလမ်းကြောင်းထဲ အာကာ့လရည်တွေအားနဲ့ပန်းဝင်လာတော့တယ်။
အာကာပြန်သွားတော့ သီတာမှန်ထဲမှာကိုယ့်ဘာသာပြန်ကြည့်ရင်းသဘောကျနေသည်။ အသက် ၃၆နှစ်ဆိုသော်လည်း ခုချိန်ထိယောင်္ကျားတွေကြိုက်ကြသေးသည် မဟုတ်လား။
ရွှေတောင်မှာ အသက်သုံးဆယ်ကျော်နေခဲ့တုန်းက သူ့ဘဝမှာ ယောကျာ်းတစ်ယောက်သာအတွေ့အကြုံရှိဖူးတာ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်နဲ့ကြိုက် အဲ့တစ်ယောက်နဲ့အိမ်ထောင်ကျ အဲ့တစ်ယောက်ပဲအထိအတွေ့ရှိဖူးသည်။
ခုရန်ကုန်ရောက်မှသုံးနှစ်အတွင်း နှစ်ယောက်၊ ပွဲစားထဲမှာလဲ သူ့ကိုကြံစည်ချင်တဲ့သူ တွေရှိတယ် ဒါတောင်သူ ခပ်တည်တည် ခပ်တန်းတန်းနေတက်တဲ့သူမို့လို့။ သူနဲ့ဖြစ်တဲ့ ပထမတစ်ယောက်က ဦးအောင်မိုး၊ သူအလုပ်လုပ်တဲ့ကုန်စုံဆိုင်သူဌေး မုဆိုးဖိုကြီး သူမငွေလိုလို့ သူ့အိမ်မှာပိုက်ဆံသွားဆွဲတုန်းက ဖြစ်ကြတာ၊ အဲ့တုန်းက သူ့လဲစိတ်ပါနေတုန်း အခြေအနေတစ်ခုအရမို့၊ နောက်ပိုင်း နှစ်ခါထက်ဖြစ်ဖူးလဲ သူစိတ်သိပ်မလာ။
ခုတစ်ယောက်ကတော့ အသက် ၁၈လောက်ပဲရှိဦးမယ့်ကောင်လေး၊ ဒါကတော့ ဖြူဖြူနုနုကောင်လေးကိုသူချစ်လို့ မထင်မှတ်ဘဲဖြစ်တာ။ သီတာအတွေ့အကြုံနဲနဲလေးနဲ့ကလေးကိုဆရာလုပ်ခဲ့ရတယ်၊ သူမရဖူးတာ ခံစားကြည့်ချင်တာမှန်သမျှခိုင်းသည်၊ ကောင်လေးကလဲသူခိုင်းတာအကုန်လုပ်သည်။ ဒီိပိုးဟပ်ဖြူလေးနဲ့ကျမှ သူကိုယ်တိုင်လဲအရမ်းထန်ပြီး တခါမှမပြောဖူးတဲ့စကားကြမ်းကြမ်းတွေပြော၊ အရမ်းစိတ်ပါနေတာအံသြရသည်။ အာကာက နောက်တစ်ခါထပ်တောင်းလုပ်ပြီး မပြန်ခင်နောက်ထပ်လာခွင့်တောင်းသွားသည်။ သူကခေါ်တောင်ထားချင်တာ ခစ်စ်။ ဖောက်ပြန်မိပြီဆိုတဲ့အတွေးကတော့ လမ်းခုလပ်တွင်ရပ်သွားရသည်ပေါ့ သူနယ်မပြန်တာလဲ တစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်မဟုတ်လား။
နောက်တစ်နေ့ ဆိုင်ရောက်သွားတော့ စောနေသည် ဦးအောင်မိုးတစ်ယောက်တည်း၊ သူနှုတ်ဆက်ပီးဝင်သွားလိုက်တယ်၊ အတူလုပ်နေတဲ့ ကောင်မလေးနီလာက စာမေးပွဲရှိလို့ခွင့်ယူထားသတဲ့၊ သူတစ်ယောက်တည်းအလုပ်တွေရှုပ်တော့တာပေါ့။ ခနနေတော့
ရပါတယ် ဦးရဲ့ ဈေးဝယ်မှသိပ်များတာ
ရော့ လက်ဖက်ရည်ဝယ်လာတယ် သောက်လိုက်ဦး
ဘယ်သူမှမရှိပါ သီတာရယ် ဖေကြီးလို့ခေါ်ပါအုံး သီတာအဲ့လိုမခေါ်တာကြာပြီနော် ဖေကြီးသတိရနေတယ်သီတာ
ဒါကဦးအောင်မိုးရဲ့ဆိုက်ကို၊ သူစိတ်ကြွလာတဲ့အခါတိုင်း သူ့ကိုအဖေကြီးလို့ခေါ်ခိုင်းတယ် သီတာကိုလဲသူ့သမီးအကြီးမနဲ့တူလို့သူစိတ်ထပြီးလုပ်ချင်လာရပါသတဲ့ ကဲ ကိုယ့်သမီးကိုများ။ မနေ့ကမှ အာကာနဲ့လုပ်ခဲ့ကြပီးတာဆိုတော့ စိတ်သိပ်မပါသော်လည်း ငွေတွင်းကြီးမို့အတင်းမငြင်းချင်ပါ။
အွင် . . . ဦးအောင်ကလဲစောစောစီးစီး
မတွေ့ရတာကြာပီမဟုတ်လား သီတာရယ် (ပြောရင်းသူ့အနောက်မှာလာရပ်တယ်၊ သူ့ဟာကြီးက မမာတမာဖြစ်နေပီ) ထပ်တွေ့ချင်သေးတယ် . . .
သူ့ဖင်ကြားထဲနွေးနွေးကြီး လာထောက်တော့ ရင်တုန်ပီးဖေကြီးလို့ခေါ်လိုက်တာမိတာသီတာ့အမှား၊ ဟိုကသူကြားချင်တာလဲကြားရရော အဆင့်ပိုတက်လာတယ်၊ သီတာ့တင်ကြီးကို ထမီပေါ်ကနေပဲကိုင်လိုက်တာ ရင်တောင်တုန်သွားတယ်။ သူတို့ဆိုင်လေးက လူသွားလူလာသိပ်မများတဲ့ဒေါင့်နဲ့ ကောင်တာအကွယ်မှမို့လမ်းသွားလမ်းလာတွေမြင်မှာတော့မပူရ။
ဒါနဲ့ သမီးလေးသီတာအတွက်လက်ဆောင်၊ သီတာလေးအတွက်ဝယ်ထားတာ
အနောက်ကနေ ဖင်ကိုထောက်ပီးရွှေဗူးလေးတခုလာပေးတယ်။ သူရုံးမရဘဲ ဖွင့်ကြည့်တော့လက်စွတ်ကလေး၊ သိပ်တန်ကြေးကြီးပုံမပေါ်ပေမဲ့ ရွှေဆိုတာမိန်းမကြိုက်လေ ဒါလေးတွေနဲ့ပဲသူ့ကိုချုပ်နေတာဖြစ်သည်။ ဟိုတခေါက်လဲနားကပ်လေး။
ဒီည ၈နာရီလောက်အလုပ်သ်ိမ်းပီး ထပ်တွေ့ရအောင်သီတာရယ် ဖေကြီးလွမ်းလှပီ
ဖေကြီးကလဲ ဇွတ်ပဲ လူတွေတွေ့သွားဦးမယ်
လက်ဆောင်ရတော့ပျော်နေသဖြင့် ညုပြောလေးနှင့် ဦးအောင်မိုးလီးကြီးကိုပုဆိုးပေါ်ကနေဖမ်းကိုင်လိုက်သေးသည်။ ခုနကမာနေသောအချောင်းကြီးက ချက်ချင်းတောင်တက်လာတယ်။ ဒီလူကြီးဘာဆေးတွေစားထားလဲမသိ သူ့ယောင်္ကျားနဲ့စာရင် နဲနဲတိုသလိုရှိပေမဲ့ စိတ်ထစရာလုံးပတ်တုတ်တုတ်ကြီးကိုကိုင်ပြီး နောက်ပြန်ဂွင်းတိုက်ပေးလိုက်တယ်။ ဦးအောင်မိုးက လူရှင်းမရှင်းတချက်ကြည့်ပီး သီတာနို့ကြီးကိုအနောက်ကနေပင့်ကိုင်လိုက်တော့ လှန့်သွားရသည်။
အိုး လူတွေမြင်ကုန်မယ် ဖယ်
ရသလောက်ညှစ်လိုက်သေးသည်၊ ဦးအောင်မိုးကြည့်ရတာဖြစ်နိုင်ရင်ခုချက်ချင်းဆိုင်ပိတ်ပီး လိုးလိုက်ချင်ပုံရသည်၊ အနောက်ကထောက်ပီးညှောင့်တာကလဲထမီတောင်ပေါက်လောက်တယ်။
ခနတော့လူသွားလူလာများလာသဖြင့် လူခွါလိုက်တယ်ပေမဲ့ အဖိုးကြီးရဲ့ငမ်းငမ်းတက်မျက်လုံးတွေက သီတာကိုစိတ်ကူးနဲ့လိုးနေပုံပဲ၊ သူ့နို့သီးခေါင်းတွေထောင်လာရပြန်သပေါ့။ တနေကုန်လူလစ်ရင်လစ်သလို ဖင်လာကိုင်လိုက်နို့လာနှိုက်လိုက်လက်ကမြင်းနေတာ တော်တော်ပျော်နေတယ်ထင်တယ်။
“ ကဲ လူလဲသိပ်မလာတော့ဘူး သီတာလဲတစ်နေကုန်တယောက်ထဲပင်ပန်းနေပီ ပိတ်ကြရအောင်” ပုံမှန်လဲဒီအချိန်လူမကျတာသိသိကြီးနဲ့ကို၊ သီတာလဲနောက်ချင်လာတာနဲ့
ဟုတ်ပနော် သီတာလဲပင်ပန်းပီး အိပ်ချင်လာတာနဲ့အတော်ပဲ
သီတာ အိပ်ချင်လို့လား အိမ်မပြန်နဲ့တော့ ဖေကြီးဆီမှာအိပ်သွားလေ သမီးကြီး
အပေါ်ထပ်ကသူ့အခန်းထဲရောက်ရင် အိပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့များ ဟွန့်
တဏှာခိုးတွေဝေနေတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပီး ဖင်ကိုတချက်ညှစ်ပီး တစ်ချက်နမ်းလိုက်သေးတယ်။ ဒီလူကြီးတော်တော်ဖြစ်နေတာပဲ။ တံခါးတွေဘာတွေပိတ်ပီးတာနဲ့ ဆိုင်ထဲကနေအပေါ်တက်တဲ့လှေကားဆီကိုလက်ဆွဲခေါ်သွားပြီး
ဟင် သီတာအိမ်ပြန် ရေချိုး
ရှုး . . . အချိန်တွေမဖြုန်းပါနဲ့ကွာ အပေါ်ထပ်မှာရေချိုးခန်းရှိပါတယ် (တလှမ်းချင်တက်သွားတဲ့ သီတာ့တင်ဆိုင်တွေကို အားမလိုအားမရ ပုတ်လိုက်ပီး) ကျန်းမာရေးကောင်းလိုက်တဲ့သမီးကြီး
အခေါ်အဝေါ်တွေကိုက သမီးနဲ့ဖေကြီးဆိုတော့သီတာလဲ တကယ့်သူ့သမီးလိုကလေးဆန်သွားရသည်ပေ့ါ။ အပေါ်ထပ်ရောက်တာနဲ့ သူ့ကိုဖက်နမ်းနေတဲ့အဖိုးကြီးကို ခနတားထားပီးရေဝင်ချိုးရသည်။ တနေကုန်ပင်ပန်းထားတာဆိုတော့ ရေချိုးလိုက်မှလန်းသွားသည်။ ဟိုကြားဒီကြားတွေလဲမနံအောင်ဆပ်ပြာသေချာတိုက်။
သီတာရေဝင်ချိုးနေတုန်း ဦးအောင်မိုး သူဝယ်လာတဲ့ဆေးကို သေချာအောင်နောက်တလုံးထပ်သောက်လိုက်တယ်၊ မနက်ကတစ်လုံးသောက်ပီး အစွမ်းကိုကျေနပ်လောက်ပေမဲ့ ထပ်သောက်တော့ပိုစွမ်းတာပေါ့။ သီတာသူ့ဆိုင်မှာလုပ်တာနှစ်နှစ်ကျော်ပြီ၊ နယ်ကနေအလုပ်လာလုပ်တဲ့ ခလေးတစ်ယောက်အမေဖြစ်ပေမဲ့ သီတာ့ဒင်ကြီးကိုသူအရူးအမူးသဘောကျတယ်၊ နိုင်ငံခြားမှအိပ်ထောင်ကျနေတဲ့ သူသမီးအကြီးမနဲ့ရုပ်ကလဲခပ်ဆင်ဆင်ဆိုတော့ သမီးပေါ်ကြံစည်မကောင်းတဲ့ဟာတွေ သီတာအပေါ်ငွေပေးကြံစည်လိုက်တော့တယ်။
အဲ့အချိန်ထမီရင်လျားနဲ့ ရေချိုးခန်းထဲကထွက်လာတဲ့ သီတာ့ကိုမြင်တော့ တဘတ်သွားပေးရင်း
ရော့ တဘတ်၊ ဖေကြီး သမီးကြီးကအရမ်းလှတာပဲ
အင် ဟုတ်လို့လား အသက်ကြီးနေပါပြီ ဖေကြီးရယ်
ဘယ်လောက်ကြီးကြီး ဖေကြီးအတွက်တော့ ဒီသမီးကအလှဆုံးပဲ၊ ရွှတ်
သွား သွား ဖေကြီးလဲရေသွားချိုး
သူ့လည်တိုင်တွေလာနမ်းတဲ့ဦးအောင်မိုးကိုရေချိုးခန်းထဲတွန်းပို့လိုက်တယ်။ အောက်ကမာမာကြီးကလဲ ဟိုထိုးဒီထိုးနဲ့၊ ဒီအဖိုးကြီး နွားငတ်ရေကျဖြစ်ဦးမယ်လို့တွေးမိတော့ သူ့စိတ်တွေထလာရပီး နို့သီးခေါင်းလေးကထောင်လာတယ်၊ ဒီရက်ပိုင်း စိတ်တွေတော်တော်ထရပါလား။ လူတစ်ယောက်ရေချိုးပြီးရင်သူ့ကိုလာလိုးဖို့ကုတင်ပေါ်ကစောင့်နေရတာ ပထမဆုံးဖြစ်ပြီး ရင်လဲဖိုရသည်။ ဦးအောင်မိုးရေချိုးခန်းထဲကထွက်လာလို့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ တဘတ်ပါမလာ၊ သူ့လီးကြီးက ရှေ့ကိုငေါငေါကြီးထွက်နေသည်။
ဟာ ဖေကြီး ညစ်ပတ် သီတာရှိတာသိရဲ့သားနဲ့
သမီးက ရှက်လို့လား ပြပါဦးရှက်နေတဲ့မျက်နှာလေး
အွင်. . .
ကုတင်ပေါ်ကိုဂမူးရှူးထိုးတက်လာပြီး လာနမ်းတယ်၊ သူ့လက်တွေကလဲ သီတာထမီရင်လျားကိုဖြုတ်လိုက်တော့ ပေါ်လာတဲ့သီတာရင်အုံထွားထွားကြီးကိုစိုက်ကြည့်ပီး ထောင်နေတဲ့သပြေသီးရောင်နို့သီးခေါင်းတွေကိုဖမ်းစို့တော့တာပဲ၊ အောက်က ဖင်သားတွေကိုလဲဖျစ်ညှစ်နေသေးတာ၊
အာ . . .ာဖေကြီး ဖြေးဖြေး သီတာထွက်မပြေးပါဘူး
လှလိုက်တာ သမီးကြီးရယ်၊ သမီးကြီးကိုဖေကြီးလုပ်ချင်နေတာကြာဘီ သိလား
(သူ့မျက်နှာကိုတည့်တည့်ကြီးကြည့်ပြီးမေးနေတဲ့ လူကြီးကိုနောက်ချင်စိတ်အပြင် သူလဲစိတ်ပါလာသဖြင့်)
ဘာလုပ်ချင်တာလဲ၊ လူကိုလိုးချင်နေတာမဟုတ်လား ဖေကြီး
(သီတာ့စကားတွေကြောင့် ဦးအောင်မိုး စိတ်ဘရိတ်ပေါက်သွားပြီ၊ သီတာ့ပေါင်ကြားထဲဝင်လာပြီး)
ဟုတ်တယ်သမီး၊ သမီးဖင်ကြီးကိုကြည့်ကြည့်ပီးဖေကြီးလီးတောင်နေတာ သမီးကိုလိုးချင်နေတာ
ပြောပြီး သူ့တုတ်တုတ်ကြီးကို သီတာ့အကွဲကြောင်းထဲအတင်းထိုးထည့်လိုက်တော့တယ်၊ နှစ်ယောက်လုံးစိတ်ပါနေသဖြင့်နာတာကိုမသိလိုက်၊ တဖြေးဖြေးဝင်သွားတဲ့လီးနဲ့ပြန်ထုတ်လိုက်ရင်ကပ်ပါလာတဲ့သီတာအတွင်းသားလေးတွေကိုကြည့်ပီး အရသာခံနေကြရင်း ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ဖြင့် ခနမြှင်းလိုးနေပီး အရည်လိုက်တာတော့ ဆိုင်ကယ်စီးပုံစံနဲ့ ဖေကြီးကြမ်းတော့တယ်။
နေ့စဉ်နီးပါးစိတ်ကူးနေရတဲ့ အကိတ်ကြီးသီတာ၊ လွယ်လွယ်ကပ်မရ သူတောင်ငွေပေးလိုက်ရွှေပေးလိုက်နဲ့မနည်းချူချုပ်လိုးနေရတဲ့ သီတာကြီး သူဆောင့်လိုက်တိုင်း မျက်နှာလေးရှုံမဲ့သွားပုံက သူသမီးကြီးနွယ်နီထွန်းနဲ့တူလွန်းသဖြင့် ဦးအောင်မိုးစိတ်ပိုကြွလာရတယ်။
အဖိုးကြီးဆေးတွေစားလာတာသေချာပါတယ်၊ အရင်ကဆိုဒီလောက်မဆောင့်နိုင်၊ လီးလဲဒီလောက်မမာဘူး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လက်စွပ်လဲရ ဆေးသောက်ပြီးလဲချတော့ သီတာကျေနပ်ရပါသည်။ ပေါင်တွေကိုအစွမ်းကုန်ကားမြှောက်ထားပေးပီး အဖုတ်အထဲကသူ့လီးကိုညှစ်ပေးလိုက် အောက်ကနေသူ့ကိုပြန်ဆောင့်ပေးလိုက်နဲ့ကျေးဇူးဆပ်လိုက်တယ်။
အာ . . . ကောင်းလိုက်တာ သမီးရယ်၊ ဖေကြီးလိုးတာကောင်းရဲ့လား
အင်း ကောင်းတယ်ဖေကြီး အရင်ကထက်ပိုကောင်းတယ် အာ
ရှီး . . . . သမီးးကိုကောင်းကောင်းလိုးချင်လို့ဖေကြီးဆေးစားထားတာ အား သမီးကြိုက်လား
အင်း . . . အာ . . ကောင်းတယ်ဖေကြီး ကြိုက်တယ် ဆောင့် ဆောင့် အား ပီးချင်လာပြီ အား
နို့သီးခေါင်းတွေကိုခြေရင်း တုန်ခါနေတဲ့သူ့နို့အုံနှစ်လုံးကိုဆွဲပီးဆက်တိုက်ဆောင့်လိုက်တော့ သူအရမ်းကောင်းပြီး ပီးသွားတယ်။ အဆောင့်မရပ်သေးတဲ့ ဦအောင်မိုးဖင်ပြောင်ကြီးကိုလက်သည်းတွေနဲ့ကုတ်ပီး ပီးပလိုက်တာ၊ ဦအောင်မိုးလဲခနငြိမ်ပီး သီတာပီးတာကိုခံစားနေရပေမဲ့ သူမပီးသေး။ သီတာငြိမ်သွားတော့ သီတာ့ကိုကုန်းခိုင်းလိုက်သည်။ လှလိုက်တဲ့ဖင်ကြီးတွေကွာ ဖျန်း ခနဲသူရိုက်လိုက်သေးသည်။ သူ့လီးထည့်မယ်လုပ်ပီးမှ သီတာကိုဒီတခါလုပ်ရင်ယက်ကြည့်မယ်ဆိုတာသတိရတယ်။
ကုန်းထားလို့အနောက်ကိုပြူးနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို သူအာသာငမ်းငမ်းကြည့်ပီးတော့ အကွဲကြောင်းထဲ လျှာနဲ့ထိုးလိုက်တယ်။ လီးဝင်လာမယ်ထင်ထားတဲ့သီတာလဲ ထွက်သက်ကိုနွေးခနဲခံစားလိုက်ရပြီး စိုစိုစွတ်စွတ်လျှာကြီးဝင်လာတော့ ရင်ထဲ အေးခနဲ၊
“ အာ့ . . စူး အိုး ဘာတွေလုပ်နေတာလဲဖေကြီးရယ်”
စကားပြန်မရတော့၊ သီတာကြိုက်မှန်းသိသွားတာမို့ ဦးအောင်မိုးယက်တာစိတ်ပါလာပြီး ပက်လက်အိပ်ပီးသူ့ခေါင်းကို သီတာ့ပေါင်အောက်ထိုးသွင်းပြီး အသာကုန်ဂျာတော့တယ်။ တကယ်တော့ ဦးအောင်မိုးလဲအခုမှဂျာဖူးတာ၊ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ဖူးတာနဲ့တက်သလောက်ယက်နေတာ သီတာကောင်းသွားတယ်။ သီတာကလဲ သူလိုချင်တဲ့နေရာကို အောက်ကအဖိုးကြီးလျှာနဲ့တည့်အောင် အပေါ်ကနေရွေ့ပေးတယ်။
အာစ် . . အွင် ဖေကြီး လိုးတော့ကွာ သမီးကိုလိုးတော့ အင်
ဖင်နှစ်လုံးကိုကိုင်ပီးအောက်ကနေအားရပါးရယက်စုပ်နေတော့ ချက်ချင်းရပ်မရဘူး၊ ခနနေမှအောက်ကပြန်ထွက်ပြီး နေရာယူလိုက်တော့ လီးက စိတ်တိုင်းကျမမာတော့သလိုဆိုတော့
သမီး ဖေကြီးကို ဟို ဟို
စုတ်ခိုင်းချင်တာပြောမထွက်၊ သီတာလှည့်ကြည့်ပီးသဘောပေါက်သွားတယ်၊ ဘာမှမပြော နောက်လှည့်ပီး တခါတည်းဦးအောင်မိုးလီးကြီးကို ကုန်းစုပ်လိုက်သည်။ သီတာပါးစပ်ထဲသူ့လီးကြီးကိုစုပ်ပေးနေတာကိုကြည့်ပီး ပီးတောင်ပီးချင်သွားတယ်။ သူ့လီးကိုစုပ်ပေးနေတဲ့သီတာ့နှုတ်ခမ်းတွေရယ်၊ တွဲရရွဲကျနေလို့သူပင့်ကိုင်ထားရတဲ့ သီတာ့နို့အုံကြီးရယ် ပီးတော့ ကုန်းလျက်လှမ်းစုတ်ရတာမို့ ဖင်ထောင်သွားတဲ့သီတာ့အိုးကားကားကြီးရယ် မြင်သမျှဟာသူ့အတွက်စိတ်ကြွစရာတွေချည်း။
အင်း ဟုတ်ပီ ခါးလေးခွက်ထား အေး အဲ့လို
အား . . . ဖြေးဖြေးဖေကြီး အာ့စ် . .
ဆေးအစွမ်းကြောင့်လားမသိ လီးကပိုပူပြီး ပိုပွလာသလိုပဲ၊ သီတာအဖုတ်နှခမ်းသားတွေကိုပွတ်တိုက်သွားသလိုမျိုးခံစားလိုက်ရတယ်။ သီတာကဖင်ကိုဦးအောင်မိုးစိတ်ကြိုက်ထောင်ပေးထားရင်း သူကတော့မွှေ့ယာပေါ်မျက်နှာအပ်ပြီးကိုခံစားတာ၊ အသံတောင်မထွက်နိုင်တော့။ ဦးအောင်မိုးလဲ သီတာ့ခါးတုတ်တုတ်လေးကိုကိုင်ပီးတော့ တဖောင်းဖောင်းကို ဆောင့်သည်။ သူ့မိန်းမသေသာသွားတယ် ဒါမျိုးမလိုးဖူးလိုက်ရတာနာတယ်။ မိနစ်၂၀လောက်ကြာတော့ သူဆက်မထိန်းချင်တော့
ကောင်းလိုက်တာသမီးလေးရယ် အား . .
ဖတ် ဖတ် ဖတ် . . . အားစ်
နွေးပြစ်နေတဲ့လရည်တွေသီတာသားအိမ်ခေါင်းထဲပန်းထည့်လိုက်တယ်။ ဦးအောင်မိုး သိပ်ကျေနပ်သွားတယ် သူ့ဘဝမှာ အကောင်းဆုံးပီးခြင်းပဲ။ သီတာ့အထဲကညှစ်ပေးနေတာလေးကိုမျက်လုံးမှိတ်ငြိမ်ခံရင်းနဲ့ပဲ သီတာ့ဘေးမှာကပ်လဲပြီး ခဏအားပြန်ဖြည့်လိုက်သည်။
နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ ဦးအောင်မိုးပြန်နိုးလာပြီးသီတာကတော့ သူ့ဘေးမှာ အိပ်ပျော်အနားယူနေလေရဲ့။ သူ့ကိုအကောင်းဆုံးပေးဆပ်ခဲ့တဲ့သီတာကိုလဲ သနားပြီး သိပ်ချစ်သွားတယ် နောက်ပြီး ကိုယ်တုံးလုံးဘေးတဆောင်းကြီးအိပ်ပျော်နေလေတော့ သူသိပ်သဘောကျနေတဲ့ သီတာဖင်ကြီးက သူ့ကိုလန်းဆန်းသွားစေတယ်လို့သူထင်သည်။ အချိန်ကြည့်တော့ ၇နာရီဆိုတော့ သိပ်နောက်မကျသေး သူနောက်တခေါက်ဆွဲလိုက်ချင်သေးသည်။
ဒီနေ့သီတာအိပ်ယာထနောက်ကျတယ်၊ မနေ့ကဦးအောင်မိုးနဲ့ အကဲလွန်ပြီး နောက်နှစ်ချီလောက်ဆော်ပြီးမှ ပြန်တာဆိုတော့ အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ တခါတည်းထိုးအိပ်လိုက်တာ ခုမှနိုးတယ်။ ပင်ပန်းတာလဲပါတာပေါ့လေ။ ဒါနဲ့ကမန်းကတန်းရေမိုးချိုးပြီးဆိုင်သွားလိုက်တော့ အဘိုးကြီးလဲခုမှထဆိုင်ဖွင့်နေတုန်းထင်ပါရဲ့။
ဆောရီးနော် ဦး သီတာအိပ်ယာထနောက်ကျသွားတယ်
ဟား ဟား ဦးလဲခုမှနိုးတာပါသီတာ၊ ဆိုင်ခင်းထားဦး ဦးမနက်စာသွားဝယ်လိုက်ဦးမယ်
အားရပါးရပြုံးပြသွားတဲ့ ဦးအောင်မိုးရဲ့အပြုံးကြီးကိုသူနဲနဲတောင်ရှက်သွားတယ်၊ နီလာလဲစာမေးပွဲဆိုတော့ တစ်ပတ်လောက်ကြာဦးမယ်ထင်သည်။ ဒီတပတ်လုံးဘယ်လိုပတ်ရှောင်ရမလဲဟုစဉ်းစားရင်း အင်း မနေ့ကလို လက်စွပ်လဲရ ဆေးလေးသောက်ပီးအချခံရရင်တော့လဲ မဆိုးပါဘူးဟု ခပ်ပြုံးပြုံးစဉ်းစားမိနေတုန်းမှာပင်
ဟယ် လန့်လိုက်တာ ကိုညီရယ် ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ဘာလာဝယ်တာလဲ
စူပါဆယ်ထုတ်ဗျို့ ပြီးတော့ မသီတာကိုတွေ့တာနဲ့တခါတည်းပြောရဦးမယ် ကျနော့်အဒေါ်က အိမ်လူငှားတင်ချင်လို့တဲ့ အဲ့ဒါ မသီတာဆီမှ ပြောထားတဲ့လူလေးဘာလေးမရှိဘူးလား
အင်း….ခန ကျမစဉ်းစားလိုက်ဦးမယ် ဒါနဲ့ အခန်းကဘယ်မှာလဲ
စကားလဲပြောရင်း ကော်ဖီထုတ်လေးတွေလှမ်းဖြုတ်နေတဲ့ မသီတာဖင်တုန်းကြီးတွေကိုကြည့်ရင်း ကိုညီဇတွေးတွေမြိုချနေမိသည် အင်း ဒီဆိုင်လာတိုင်း ဒီလိုပဲ
အင်း . . . . . မသီတာအလုပ်ဘယ်အချိန်ပြီးလဲ ဆိုင်ပိတ်ချိန်ဆိုရင်ရော
ဆိုင်ပိတ်ချိန်ကတော့ ၈နာရီ ၉နာရီလောက်ပေါ့ သိပ်မသေချာဘူး ဒီလိုလုပ် သော့ကကိုညီ့ဆီမှာဆိုရင် ကျမဆိုင်ပိတ်ရင် ကိုညီ့ကိုဖုန်းခေါ်လိုက်မယ်လေ ဘယ်လိုလဲ
အင်း . . . မဆိုးပါဘူး ဒီညလား
ခနနေ ဦးအောင်မိုးပြန်ရောက်လာတော့ ဈေးဝယ်ဖို့စာရင်းလုပ်ဘာညာနဲ့ အလုပ်နဲနဲရှုပ်သွားပြီး ညနေစောင်း အလုပ်တွေပါးသွားတော့မှ အအေးနှစ်လုံးလှမ်းမှာပြီးအအေးသောက်ရင်း
အခုမေးတာမဟုတ်ဘူး ညကအတော်ပြိန်းသွားလားမေးတာ၊ ဖေကြီးတောင် ဖလက်ပြသွားတယ် ဟီး
သွားပါ ခုမှ ညကတော့သရဲစီးနေသလိုဘဲ ဆေးကအစွမ်းနော် ဟွန့်
ဟဲဟဲ ဆောရီးပါသီတာရယ် ဦးအရမ်းကြမ်းသလိုဖြစ်သွားရင်၊ သီတာ့အိုးကြီးမြင်ရင် မနေနိုင်လို့ပါ
လက်ကလဲ သီတာ့ဖင်ကြီးကိုလှမ်းညှစ်ရင်း အသားယူလိုက်သေးသည်။ မနေ့ကလောက်ထထကြွကြွှမရှိသော်လည်း လူလစ်တာနဲ့လက်နဲ့တော့အသားယူချင်သေးသည်။
အိုး ဦးကလဲ ဒီဖင်ပဲလိုက်ရန်ရှာနေ သူဖာသာနေတာကို၊ ဒီနေ့လဲဆေးစားလာပြန်ပီလား
ဒီနေ့တော့ ဦးပင်ပန်းနေလို့ဆေးမစားထားဘူး အနားယူ အားဖြည့်လိုက်ဦးမယ်။ ဘာလဲ သီတာက ဆေးစားစေချင်ပြီလား ဟဲ ဟဲ
အာကာ့ကြောင့်စိတ်ထပြီး သောင်းကျန်းမိတာကို သူ့ကြောင့်ထင်ပြီး မာန်တက်နေသည်။ အဖိုးကြီးမှာဆန္ဒရှိသော်လည်း ခန္ဓာကမလိုက်တော့
အမလေး တော်ပါ ဒီညစောစောအိပ်ချင်တယ်
ဒါဆို မနက်ဖြန်ညမှပေါ့ သီတာလေးရယ် . . .
ကဲ ဒီနေ့ဆိုင်စောစောပိတ်ပြီး သီတာလဲပြန်နားတော့
သွားခါနီး အနောက်ကနေသူ့လည်ပင်းလေးနမ်းရင်း နို့လေးလဲလှမ်းဆွဲသွားသေးသည်။
ဈေးလာဝယ်သော တခြားပွဲစားတွေတွေ့မှ ကိုညီပြောခဲ့တာသတိရတယ်။ အိမ်ငှားဖို့ပြောထားတဲ့လူတွေပြန်စဉ်းစားရင် ဘာဖြစ်ဖြစ်ညနေတော့ အိမ်လိုက်ကြည့်ထားရမည်။ ကိုညီဆိုမှ သူ့အကြောင်းခေါင်းထဲရောက်လာသည်။
ကိုညီက သဘောင်္သား၊ ကလေးတယောက်အဖေ၊ လူဖြောင့်၊ သူပြန်လာစတုံးက သူ့သူငယ်ချင်းတယောက်အတွက် အိမ်ငှားပေးဖြစ်ရင်း ခင်ကြတာဖြစ်သည်။ ဈေးလာဝယ်ရင် သူ့အကြည့်စူးစူးတွေခံရသော်လည်း ရည်ရည်မွန်မွန်စကားပြောတက်သူဖြစ်ပြီး သူနှင့်ဆက်ဆံရတာအဆင်ပြေသည်။ နဲနဲကြာတော့ဝယ်သူပါးသွားပြီး ဆိုင်စောစောသိမ်းကာ ကိုညီ့ကိုဖုန်းခေါ်ပြီး ကားဂိတ်မှာချိန်းလိုက်သည်။
ညနေ၆ခွဲလောက်ရှိသဖြင့် ကားကအရမ်းမကျပ်သော်လည်းထုံးစံအတိုင်းလူအပြည့်၊ ကိုညီ ကပထမတော့သူ့ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားဖို့ပင်၊ ဒီနေ့မှသူ့မိန်းမက သူ့ဘိုးတော်အိမ်သွားစရာရှိတယ်ဆိုပြီးဆိုင်ကယ်ယူသွားသဖြင့် ဘက်စ်ကားနဲ့သွားရခြင်းဖြစ်သည်။
ကိုညီအနေနဲ့မသီတာဖင်ကြီးကိုသဘောကျနေပေမဲ့ ဒီလိုလုပ်ဖို့တော့ စိတ်ကူးမရှိပါ။ ပထမဘေးချင်းယှဉ်လျက်ဖြစ်သော်လည်း လူများလာတော့ ဒေါ်သီတာ ကိုညီ့ရင်ခွင်ထဲဝင်ရပြီ၊ အောက်ကဖင်ကြီးကိုလဲအလှူပေးရပြီ။ မသီတာက နေ့လည်ကအဖိုးကြီးလက်ဆော့ထားသောအရှိန်တွေနဲ့စိတ်နဲနဲထနေပြီး တစိမ်းလည်းမဟုတ်တာမို့ ပုဆိုးအောက်ကတဖြည်းဖြည်းထကြွလာသာ အချောင်းကြီးကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ထားနိုင်သော်လည်း ကိုညီကတော့အားနာနေရသည်။
လူနဲနဲချောင်လို့အနောက်ကိုပြန်ဆုတ်သော်လည်း လူပြန်တိုးရွေ့တော့ နေရာပြောင်းပြီးထောက်သလိုတောင်ဖြစ်လာသည်မဟုတ်ပါလား။ တချက်တချက်ဖင်ကြားထဲသူ့အမြှောင်းလိုက်ကြီးဝင်မွှေသလိုဖြစ်သွားတော့ အားနာပြီး
ရလား မသီတာ၊ လူအရမ်းတိုးတာနဲ့
ဒီအတိုင်းက အဆင်ပြေတယ်၊ သူအဲ့လိုအနားနားတိုးတိုးလေးပြောလိုက်မှ လည်ဂုတ်နားသူ့ထွက်သက်နဲ့တိုးတော့ သီတာ့မှာ ရွစိရွစိဖြစ်ရသည်ပေါ့၊ အောက်ကထောက်ထားတဲ့အချောင်းကလဲ ပေါ့သေးသေးမှမဟုတ်တာ၊ ဒါပေမဲ့ သူအနေခက်မှစိုးလို့
ရတယ် ကိုညီ အေးဆေးပါ
သူငုံပြီးကပ်ပြောတဲ့ဘက်ကို မသီတာကလှည့်ပြီးမော့ပြောတာဆိုတော့ ကိုညီ ဒိန်း ခနဲသွေးတိုးသွားရသည်။ စူးစူးဝါးဝါးစိုက်ကြည့်ပြီး အောက်ချထားတဲ့လက်တဖက်ကလဲ ရှေ့ကသီတာ့ခါးကိုမသိမသာလေးဖက်လိုက်မိတယ်။
လူချင်းကလဲထပ် မျက်နှာနှစ်ခုကလဲနီးနီးကပ်ကပ်ဆိုတော့လူက ဖက်မနမ်းမိအောင်ထိန်းထားပေမဲ့ သီတာဖင်ကြားထဲဝင်နေတဲ့သူ့ညီလေးကတော့ အောက်သွေးတဒုတ်ဒုတ်တိုးနေတော့တာပဲ။ မသီတာကလဲ ကိုညီ့ထွက်သက်ထိမိတဲ့ လည်ဂုတ်နားကနေ မီးညှောင့်ရိုးနားအထိ ကြက်သီးတွေထပြီး ဖင်တောင်နဲနဲကောက်ပေးမိသလို အားနာနေတဲ့ကိုညီကလဲ သူ့လီးကိုလက်နဲ့အုပ်ဖို့လက်ကိုနေရာရွေ့ပေမဲ့ ကြားခံနေတဲ့ မသီတာဖင်ကြီးနဲ့ထိမိတဲ့အခါမတော့ ဘယ်လိုမှထိန်းမရဘဲ လုံးကျစ်ထွားအိနေတဲ့ဖင်သားကြီးကိုအုပ်ကိုင်ပြီးအားမလိုအားမရ ဖြစ်ညှစ်လိုက်မိတော့တယ်။
ရုတ်တရက် စပယ်ယာအော်သံကြောင့် နှစ်ယောက်သားပြန်သတိထိန်းနိုင်လိုက်ပြီးမှတ်တိုင်မှာဆင်းခဲ့ကြသည်။ စကားမဆိုမိဘဲ လျှောက်လာရင်း လမ်းချိုးလေးအဝင်အမှောင်ရိပ်ရောက်မှ
ကျနော်တောင်းပန်ပါတယ် မသီတာ၊ အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့မရည်ရွယ်ပါဘူး
(သူတောင်းပန်လိုက်မှ နဲနဲရှက်သွားသည်) အား ဘာကိုလဲကိုညီ သီတာနားလည်ပါတယ်
ကျနော်တမင်လုပ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး ဟို ဟို စိတ်မထိန်းနိုင်လိုက်လို့ပါ ကျနော့်အပြစ်ပါ
သူများတွေထောက်မှာစိုးလို့ ကာထားပေးတာမှ ကျနော်က ကိုင်လိုက်မိတဲ့အထိ
အိုး ရပါတယ်ဆိုမှ ဒီမှာကားစီးရင်ဒီလိုပဲသည်းခံရတာပဲ ခု တစိမ်းလဲမဟုတ်တော့… အွတ်
ရုတ်တရက် မသီတာနှုတ်ခမ်းကို ကိုညီဖမ်းစုတ်လိုက်တယ်။ မသီတာမလှပါ၊ ခုနကရင်ခုန်တာတွေနဲ့ ခုလိုမီးမှောင်မှောင်လမ်းကြားထဲမှာ ရှက်နေတဲ့သီတာ့မျက်နှာကို ကိုညီအရမ်းဖီလ်းဖြစ်သွားလို့နမ်းလိုက်တာ။ ခဏလေးပဲလမ်းကြားထဲက ခလေးနှစ်ကောင်ပြေးထွက်လာလို့ အမြန်ရပ်လိုက်ပြီး အ်ိမ်ဆီလမ်းဆက်လျှောက်လာရသည်။
ဟို ဟို ဆောရီးမသီတာ၊ ကျနော်အခွင့်အရေးယူတက်တဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး
ခု မသီတာနဲ့တွေ့မှ စိတ်တွေအရမ်းဖောက်ပြန်နေလို့
တော်သေးတာပေါ့ အခွင့်အရေးမယူတက်လို့၊ ကားထဲမှာလဲဖင်ကိုင်တယ် ခုလဲဖက်နမ်းတယ် နော်
တုံ့ပြန်တဲ့အသံထဲမှာဒေါသသံမပါလို့ ကိုညီစိတ်အေးရသည်။ မဟုတ်လို့ရပ်ကွက်ရုံးတိုင်လျှင်နာမည်ပျက်မည်။
ဆောရီးပါ မသီတာ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ ကျနော်သဘောင်္ပေါ်မှစိတ်ထိန်းနိုင်ခဲ့သလောက်မသီတာနဲ့တွေ့မှ
အမလေးကျမကို တရားခံမရှာပါနဲ့နော် ကျမလဲ တစ်ိမ်ယောကျာင်္းတွေနဲ့ တရုံးရုံးမဟုတ်ပါဘူး
ရှင်အဲ့လိုစိတ်မထိန်းနိုင်ရင် ကျမရှင့်အိမ်ထဲဝင်ရမှာတောင်ကြောက်လာပြီ… ခစ်
နှစ်ယောက်လုံးအတွေးထဲ အိမ်ထဲဝင်ရင်ဆိုတဲ့အတွေးလေးပေါ်လာတယ်၊ ကိုညီ အောက်သွေးပြန်တိုးလာသလို သီတာလဲ ကားပေါ်ကခံစားချက်မျိုးပြန်ဖြစ်ရသည်။ အိမ်ထဲရောက်လို့ ကိုညီစလာရင် သူဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမှန်းဝေခွဲလို့မရသေး
မကြောက်ပါနဲ့ဗျာ ကျနော်ကတိပေးပါတယ် ကိုက်မစားပါဘူး ဟား ဟား
ကိုက်စားမှာကိုမကြောက်ဘူး ခုနကလို စိတ်မထိန်းနိုင်ဘူးဆိုပီး ဖက်နမ်းမှကြောက်တာ ခစ်ခစ်
အာ ဟဲ ဟဲ ရှေ့ကအိမ်ပဲ
ခြံတံခါးဖွင့် မီးတွေဘာတွေဖွင့်ပြီးအိမ်ကို လှည့်ပတ်ကြည့်သည်။ အိပ်ခန်းနှစ်ခန်း၊ အိမ်သာတစ်၊ ဧည့်ခန်းမှာလဲ ဆက်တီတွေနဲ့ တီဗီဘာညာတော့မရှိ ဘီဒိုတွေ ကုတင်တွေတော့ရှိသည်။ အခန်းတွေလိုက်ကြည့်နေသော မသီတာကိုနောက်ကကြည့်ပြီး ခုနကပြောထားတာတွေနဲ့ စိတ်ထရသည်။
လင်းလင်းချင်းချင်းဆိုတော့ လူကဘာမှမလုပ်ရဲပေပုဆိုးထဲက ဆန္ဒပြနေသော ညီလေးကိုမထိန်းနေတော့
ပစ္စည်းတွေလဲပါတော့ တလနှစ်သိန်းကတော့တန်တယ် ကိုညီ
ဟုတ် အဒေါ်တို့က ဘီးလင်းမှာပဲနေကြတော့မှာမို့ လူငှားတင်တာလေ။ ကြာလေကောင်းလေပဲ အခန်းထဲမှာကုတင်တွေမွေ့ယာတွေအဆင်သင့်ပဲ အဲ
ပြောရင်းဆိုရင်ကုတင်နားရောက်သွားကြတာမို့ နှစ်ယောက်သားရင်နဲနဲဖိုသွားသည်။ ကိုညီက လုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမလားဆိုသောအတွေးနဲ့ မသီတာကတော့ သူများလာနမ်းတော့မလားဆိုပြီးရင်ဖိုရသည်။
မွှေ့ယာကိုစမ်းကြည့်ရင်း အနောက်ကငေးနေသည့် သူကိုမျက်လုံးစောင် ကြည့်တော့သူလဲကိုယ့်လို ဂွကြားမှာဖောင်းဖောင်းကြီးဖြစ်နေတာမြင်ရသည်။ ထန်နေတာကိုပင် ထိန်းသိမ်းနိုင်သောကိုညီ့ကိုအမှတ်ပေးမိသည်။ သူက လိုချင်နေလို့သူဘက်ကဆွဲဆောင်တာမျိုးမဖြစ်အောင်လဲထ်ိန်းသိမ်းရမည်။ ထိုစဉ် ကုတင်ခေါင်းရင်းကဘီဒိုတစ်ခုကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့
ဟုတ်ကဲ့ စာဖတ်သူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ကိုညီ့ကိုလှည့်ဖက်လိုက်မိသည်ပေါ့။ ချက်ချင်းပြန်ခွာသော်လည်းမရတော့ချေ။ ကိုညီကအားကြီးနဲ့ဖက်ထားတာ သီတာ့စနေနှစ်ခိုင်တောင် အိထွက်နေရပြီး စူထွက်နေတဲ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေတောင် ကျင်နေရသည်။ သူ့နှာခေါင်းကလဲ သီတာနားရွက်နားကပ်နေတာဆိုတော့ သီတာဟိုနေရာမှာ ယားကျိကျိနဲ့ အရည်တွေစိမ့်ထွက်နေပြီ။
မော့လာသောသီတာ့နှုတ်ခမ်းလေးကိုစုပ်နမ်းရင်း လက်တွေကလဲ သူသိပ်သဘောကျတဲ့ သီတာဖင်ကြီးပေါ် ပွတ်သပ်စုတ်နယ်ရင်း လက်နက်ကြီးကလဲချက်အောက်ကိုထိုးချိန်နေတော့ သီတာလဲ သူ့ကျောပြင်ကြီးကို ပြန်ပွတ်သတ်ပေးမိတော့သည်။
သီတာ့ဖက်ကမီးစိမ်းပြလာတော့ ကိုညီ ပျော်သွားပြီး ကုတင်ပေါ်အသာလေးလှဲချ သီတာ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုမက်မက်မောမောစုပ်နမ်းရင်း သီတာ့နို့တွေကို စုပ်နယ်သည်။
အိုး ကိုညီ မကောင်းဘူးထင်တယ်နော် အွတ်
ကိုညီဆီကစကားပြန်မရ၊ ပြစ်မှတ်ဆီဒါရိုက်သွားနေသည်။ အင်္ကျီနဲ့ ဘာရာလေးကိုလှန်တင်ပြီး သီတာရဲ့ မာတောင်နေတဲ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုစို့လိုက်တယ်။ တနေကုန်အလုပ်လုပ်ထားလို့ ချွေးနံကိုယ်နံလေးကိုက သူ့စိတ်တွေကိုပိုထန်စေသည်။
အိမ်ထောင်သည် သဘောင်္သားကိုညီက မြန်တယ်၊ မီးဆိုတာ ပူတုန်းထုရမှန်း သိသူမို့ သီတာ့ထမီနဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီကို အမြန်ဆွဲချွတ်ရင်း ကတင်စောင်းမှာနေရာချလိုက်တယ်။ မသီတာမှ ဘာမှပြောချိန်မရလိုက် သူ့အဖုတ်ကို ကုန်းယက်တော့တာပဲ။
အိုး .. ငရဲတွေကြီးဦးမယ် .. အို့ ဟို့
ပြောသာပြောရတာပါ အာကာ့လိုမနူးမနပ်မဟုတ်၊ အဖိုးကြီးလိုလဲဂမူးရှူးထိုးမဟုတ်။ ကမ္ဘာပတ်နေတဲ့ သဘောင်္သားလျှာဖျားမှာ မသီတာလှိုင်းစီးနေရသလိုဖြစ်မိသည်။ တော်သေးတာပေါ့ ဆိုင်ကပြန်ခါနီး ဆေးလာခဲ့မိလို့။ ကိုညီ့ပါးစပ်နဲ့ သူ့စောက်ဖုတ်ကွာသွားမှာဆိုးသလိုမျိုး ဆံပင်တွေဆွဲပြီး ခါးကော့ကာစဖုတ်နဲ့ပွတ်ပေးနေသည်။
အား..စ် ကိုညီကွာ အင်းးး
အမွှေးထူထူ၊ နှုတ်ခမ်းသားညိုညိုနဲ့မသီတာစောက်ဖုတ်ကြီးက မလိုးခင်ယက်တာနဲ့တင် စီး..နေလို့ ကိုညီအရမ်းယက်လို့ကောင်းသွားသည်။
ကစ်ဆင်ဆွဲသလိုနှုတ်ခမ်းသားကြီးတွေဆွဲစုပ်လိုက်၊ စိကပ်နေတဲ့အတွင်းသားတွေထဲ လျှာနဲ့ထိုးလိုးလိုက်ရင်း အကွဲကြောင်းထိပ်က စောက်စိလေးကို သွားနဲ့ကျိတ်ပေးလိုက်တော့ မသီတာ တွန့်လိန်ပြီး တချီပီးသွားရသည်။ ပီးနေချိန်မှာကို သူ့ဖင်ကြီးကိုပင့်ကိုင်ထားရင်း ဆီးခုံစောက်မွှေးတွေကြားလ်ိုက်ယက်နေတဲ့ကိုညီ့ကို အသဲစွဲဖြစ်ရသည်။
ပီးသွားလို့ရွစိရွစိဖြစ်နေသောအတွင်းသားလေးတွေကို ယက်လို့မဝဖြစ်နေသော်လည်း သူတို့မှာအချိန်သိပ်မရကြောင်းသိသဖြင့် အစာပိတ်အနေနဲ့ခရေညိုကြီးပါယက်ပေးပြီးမက်တပ်ထရပ်သည်။ တွင်းအောင်းချင်လွန်းလို့တဇတ်ဇတ်တုန်နေသော သူ့လီးဒစ်ကြီးနဲ့နီရဲနေတဲ့သီတာ့ထိတ်ဖူးလေးကိုနှစ်ချက်လောက်အပေါ်အောက်ဆွဲပွတ်ပြီး စီးကပ်နေတဲ့စောက်ခေါင်းထဲနစ်ချလိုက်တယ်။
အာ အ .. ကိုညီ…. အိုး
တရစ်ချင်းလိုးဝင်သွားတဲ့လီးကြီးအဆုံးရောက်တာနဲ့ ထင်ထားတာထက်အဆမတန်ပိုကောင်းနေလို့ ကျေနပ်သံကြီးနဲ့ကိုညီငြီးမိရင်း ဟထားတဲ့သီတာ့နှုတ်ခမ်းကိုအတင်းနမ်းပြီး တချက်ချင်းဆော့လိုးတော့တယ်။
သီတာကလဲ အောက်ကပြန်ကော့ပေးမိတာပေါ့ ခုနကမှပီးနေတာကိုခံစားနေတုန်း စောက်ခေါင်းထဲထိုးခွဲဝင်လာတဲ့ကိုညီ့လီးကိုလဲ အပြည့်ခံစားချင်သည်မို့လား။
ကိုညီကလဲစီးရွှဲပြီး ပျားရည်သုတ်ထားသလိုဖြစ်နေတဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးကိုလိုးရတာမို့စောင့်ချက်တိုင်တန်ဖိုးထားဆောင့်သည်။ ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်ဆက်တိုက်ဆောင့်ပြီးတော့ ကိုညီခနနားတဲ့အနေနဲ့ မသီတာကိုပုံစံပြောင်းပေးတယ်၊ ခုနကသူ့အပေါ်ထပ်ရက်ဖက်ထားရာက ထပြီး မတ်တပ်ရပ်တော့ကျွတ်သွားတဲ့လီးကြီးကို သီတာနှမြောသလိုခံစားလိုက်ရသေးသည်။
ကုတင်အောက်မတ်တက်ရပ်ပီးတာနဲ့ ပက်လက်လှန်ထားတဲ့ ဘယ်ခြေထောက်ကိုဆွဲမပြီး ညာခြေထောက်ပေါ်ထပ်ကာ လူကိုပါဆွဲလှည့်ပေးလိုက်တော့
ကုတင်စောင်းမှာဘေးစောင်းအိပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။ ဒီပုံစံတခါမှမကြုံဖူးတဲ့သီတာက ကိုညီလုပ်သမျှကိုသာ ငေးကြည့်အလိုက်သင့်နေပေးရုံ။ ဘေးစောင်းဖြစ်သွားတော့ နဂိုတည်းကဂစ်တောင့်တဲ့သီတာဟာ ရောမခေါတ်ကပန်းချီကားအလားပဲ။
အောက်ပိုင်းကိုတစောင်းထားပေမဲ့အပေါ်ပိုင်းကို ပက်လက်ဆွဲလှန်လိုက်တော့ သီတာ့နိုနို့နှစ်လုံးပိုဆွဲဆောင်မှုရှိသွားတယ်လေ။ ကောက်ချိတ်နေတဲ့သီတာ့ကိုကြည့်ပြီးကိုညီသိပ်သဘောကျသွားပြီး
ခပ်ဟဟဖြစ်နေတဲ့သီတာ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုစုတ်နမ်းရင်း လည်ပင်းတွေကတဆင့် ကော့ချွန်နေတဲ့သီတာ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေပါစုပ်နမ်းတော့တယ်။ အောက်ကတရမ်းရမ်းဖြစ်နေတဲ့လီးကြီးကိုလဲအအားမထား၊ အသင့်အနေအရကော့ပေးထားလို့ ပေါင်နှစ်လုံးကြားက အာနေတဲ့သီတာ့စောက်နှုတ်ခမ်းသားတွေကြား ပွတ်သပ်ထိုးစွရင်း ဒစ်ကိုသွင်းပြီးနောက် ခေါင်းဝင်ကိုယ်ဆံ့လီးကြီးတစ်ချောင်းလုံး အတင်းထဲခွဲဝင်လာတော့တာပဲ။
ပေါင်နှစ်လုံးထပ်ထားတော့နဂိုတည်းကစေးနေတဲ့ စောကဖုတ်လေးကပိုသေးသွားတာပေါ့။ စောက်ခေါင်းတလျှောက်ထိုးစွရင်း နှုတ်ခမ်းသားတွေပါအရသာရှိပြီး နောက်ဆုံး သားအိမ်ဝအထိ ထုတ်ထုတ်ထိတော့တာပဲလေ။
ဟွာ…း အအ အာ… ရှီး …..ကိုညီရယ် အင်းးးးးး
ဒုတ်ခနဲ သားအိမ်ထောက်သွားတာကိုညီသိတာနဲ့ မျက်တောင်လေးစဉ်း နှခမ်းလေးကိုက်ရင်း ညီးနေတဲ့သီတာ့နို့ကြီးကို ဆွဲညှစ်ရင်းဆောင့်တော့တာပဲ။
နာသွားလား သီတာ အဆင်ပြေရဲ့လား
အင်း… ဘာတွေမေးနေတာလဲကိုညီရယ် သိပ်လုပ်တက်တာပဲ အဲ့လိုဆောင့်စမ်းပါ အူး ရှီး……
အင်း … ထိတယ်ကိုညီရယ်
ကုတင်အောက်ကနေမတ်တက်ရပ်ရင်း ဖူးကောက်ထွက်နေတဲ့သီတာ့ကို ဆယ်မိနစ်လောက်ခါးအားနဲ့လွှဲဆောင့်လိုးလိုက် သီတာ့အဖုတ်ညှစ်အားလေးကိုခံစားရင်းမြှင်းလိုးလိုက်နဲ့ ကြွရွလှုပ်ရမ်းနေတဲ့သီတာ့နို့နှစ်လုံးကိုပါကိုင်ညှစ်နေပြီး ချွေးဒီးဒီးကျတဲ့အထိ စိတ်တိုင်းကျလိုးဆောင့်နေတယ်။ သူ့ဘဝလိုးဖူးသမျှထဲမှာ အကောင်းလို့ပင်ဆိုချင်သေးသည်။
မသီတာအတွက်လဲ ပုံစံသစ်မို့အဆန်းဖြစ်သလို သူ့လီးကြီးကစောက်နှုတ်ခမ်းသားတွေကိုလိုးခွဲထိုးဝင်ရုံသာမက အထဲကအူကလီစာတွေထိလာရောက်ဆော့ကစားနေလိုပင်။ သူ့ကိုထိထိမိမိအလိုးကောင်းတဲ့ကိုညီ့ကိုတောင်ချစ်လာသလိုပင်၊ သူ့ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးချွေးတလုံးလုံးနဲ့လိုးနေတဲ့ကိုညီလက်တွေကို သူ့နို့တွေပေါ်ကနေဆွဲယူဆုတ်ကိုင်ရင်းနဲနဲကြာတော့
ဟင် အ အ သီတာထပ်လာနေဘီ ပီးချင်ပြန်ပြီကိုညီရယ် အင်း…. သူမမောတဲ့အတိုင်းဘဲ အာ
ဒီဖင်ကြီးကို စိတ်ကူးယဉ်ရတာကြာနေဘီ ဟူး
မျက်လုံးလေးစဉ်းနှုတ်ခမ်းလေးဖူးပြီးပြောလာတဲ့သီတာကိုပြန်ဖြေရင်း ပိုထန်လာလို့ခုနကထက်ပိုဆောင့်တယ်။ ပီးချင်သလိုဖြစ်လာတဲ့သီတာလဲ သူဆောင့်တဲ့အတိုင်း ပြန်ခါးလေးနွဲ့ပြီးပြန်ဆောင့်ပေးရတာပေါ့။ သီတာ့ခပ်ဟဟနှုတ်ခမ်းလေးကိုလက်တွေနဲ့စမ်းတော့ စောက်ရမ်းဟော့နေတဲ့သီတာကနှုတ်ခမ်းနားရောက်လာတဲ့ကိုညီ့လက်ညိုးကြီးကိုဖမ်းစုပ်လိုက်တယ်။
ကြံဖူးကြတယ်မဟုတ်လား၊ အောက်ကလီးကလဲသူ့စောက်ပက်ကိုလိုးနေ၊ သူ့နှုတ်ခမ်းနဲ့လျှာကလဲ ကိုယ့်လီးကိုစုတ်ပေးနေတဲ့ပုံမျိုး လီးနှစ်ချောင်းရှိသလိုကိုခံစားလိုက်ရပြီး လက်ညိုးတချောင်းထဲအားမရချင်တော့၊ လက်ခလယ်ပါထည့်လိုက်တော့ သီတာကလဲစိတ်လိုလက်ရ သူ့လက်ချောင်းတွေကြားကိုလျှာနဲ့ယက်လိုက် လက်ချောင်းတွေကိုလဲ လီးစုတ်သလို စုတ်ပေးရှာတယ်။ ကိုညီလဲအထန်ကြီးထန်ပြီး ခြေတဖက်ကိုကတင်ပေါ်ထောက်ပြီး တဖုန်းဖုန်းမြည်အောင်ဆောင့်တော့တာပေါ့
ချစ်လိုက်တာသီတာရယ် သိပ်လိုးလို့ကောင်းတာပဲ ရှီး . . .
အား … ဟုတ်တယ် ကောင်းတယ်ကို ဆောင့်ကိုညီ သီတာ့ကိုမညှာနဲ့ အား အာ ပီးချင်လာပြန်ပြီကွာ အရမ်းထိတာပဲ အင်
ပီးပီ အား…… ကောင်းလိုက်တာကွ အူးဟူးဟူး …
မရတော့ဘူး ထွက်ပီ … ဟွင် ဟင်း အ အ
သူ့လီးနွေးခနဲဖစ်ပီးသီတာပီးသွားမှန်းသိတော့ ဆောင့်နေတဲ့အရှိန်ကိုနဲနဲလျော့လိုက်ပြီး သီတာ့အဖုတ်ညစ်အားလေးတွေကိုခံစားရင်း တစ်ချက်ချင်းလိုးနေပြန်လိုးနေလိုက်တယ် သူလဲသုတ်ထိန်းမှဖြစ်မယ်။ စောက်ဖုတ်နှခမ်းသားတွေကို ညှစ်ညှစ်ပီး အမောပြေသွားတော့ သူ့ကိုမှိန်းလိုးနေလို့ ဒီအတိုင်းဆိုကြာမယ်မှန်းသီတာသတိရလိုက်တယ်၊ သူ့ကိုကောင်းကောင်းလိုးပေးသွားတဲ့ကိုညီ့ကိုလဲကျေးဇူးဆပ်ချင်တာကြောင့်
အင်း ကောင်းတယ်ကိုညီရယ် သူ့သိပ်လိုးတက်တပဲ
သီတာက အရမ်းလှတာကိုး ကျနော်တော့အရမ်းကိုဆွဲနေဘီ
အွင် အပိုတွေိ. သိပ်နောက်ကျလို့မကောင်းဘူး ကိုညီ မပီးသေးဘူးမို့လား ကိုညီပြီးအောင်သီတာလုပ်ပေးမယ်လေ ဒီမှာလာလှဲလိုက်
မျက်လုံးလေးလှန်ပြီးကြာပြောလေးနဲ့သီတာ့ကြောင့် ရင်တွေဘာတွေခုန်ပြီး ကုတင်ပေါ်တက်လှဲပေးလိုက်တယ်။ သီတာလဲလှဲနေရာကထပီး ကိုညီ့အပေါ်မခွခင်မှာ မတ်တောင်နေတဲ့ကိုညီ့လီးကိုစုတ်ပေးလိုက်မိသေးသည်။
ပီးမှကိုညီ့ပေါ်သေချာခွပြီး သူ့စောက်ခေါင်းနဲ့ချိန်ပြီး ဖြေးဖြေးချင်းထိုင်ချလိုက်တယ်။ ဒီပုံစံလဲသူကျွမ်းလို့မဟုတ် အာကာနဲ့တုံးကစမ်းဖူးပြီး ခုကိုညီ့ကို ပြုစုပေးချင်လို့ဖြစ်တယ်။
တစ်ထစ်ချင်းစောက်နှခမ်းသားတွေကိုပွတ်တိုက်သွားတဲ့ လီးဒဏ်ကိုနှစ်ယောက်လုံးခံစားလိုက်ပြီး အဆုံးထိဝင်သွားတာနဲ့သီတာ ဖင်ပြန်ကြွပြီး ဆောင့်ချပေးရင်း ကိုညီ့ကိုပြန်ပြုစုလိုက်တယ်။ ကိုညီကတော့အကြိုက်ဆုံးပေါ့ အောက်ကနေ သီတာ့ဖင်ကြီးကိုထိန်းကိုင်ထားရင်း အလိုက်ပြန်ဆောင့်ပေးလိုက် ရင်ဘတ်ပေါ်အိကျလာတဲ့ နို့သီခေါင်လေးတွေစို့လိုက်နဲ့ ၁၅မိနစ်လောက်ကြာတော့
အား အာ ဟွင်း သီတာထပ်ပီးချင်လာပြန်ပီိနော် သူမပီးသေးဘူးလား အင့်အင့်အင့်
ပြောပြီးတာနဲ့ ကိုညီ့နှုတ်ခမ်းတွေကို အာသာပြင်းပြင်းစုတ်နမ်းရင်း သီတာအားရပါးရဆောင့်ပေးလိုက်တယ်။ ကိုညီလဲ အဲ့လောက်ဆောင့်နေတော့ပီးချင်နေပေမဲ့ သီတာပီးတဲ့အထိထိန်းဆောင့်တယ်။
ခနကြာတော့ လီးထိပ်မှပူခနဲဖြစ်ပီး သီတာပီးကြောင်းသိတာနဲ့ သီတာ့ကိုဆွဲလှဲပြီး အပေါ်ကနေအသကုန်တက်ဆောင့်တော့တာပဲ။ သီတာကလဲ အဲဒါမျိုးကြိုက်တော့ စောက်ခေါင်းထဲပီးနေရင်းကို ဖြဲကားပြီးကိုပိုးစိုးပက်စက်ခံပေးလိုက်တယ်။ နှစ်ယောက်လုံး ချွေးတွေရွှဲ အသက်ရှုသံတွေပြင်းဆူညံပြီး ဆယ်မိနစ်လောက်ကြာတော့ ကိုညီဆက်မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ
အား…. ကိုပီးတော့မယ် သီတာ အပြင်ထုတ်လိုက်ရမလား
ကိုညီလဲ ဗိုက်ပေါ်ပန်းထုတ်ဖို့ထုတ်လိုက်ချိန်မှာပဲ သီတာကအမြန်ကိုညီ့ပေါင်ကြားထဲကနေအောက်ကို ကိုညီ့လီအထိလျောဆင်းပြီး ကိုညီ့လီးအကိုဖမ်းစုပ်လိုက်တယ်။
သူစောက်ဖုတ်ထဲကထုတ်ထုတ်ချင်းမို့ ဒစ်ကလဲနီရဲဖူးယောင်နေပီး လီးတချောင်လုံးလဲစောက်ည်တွေရွှဲနေတဲ့အပြင် အံ့သြသွားတဲ့ကိုညီလဲချက်ချင်းမပီးသေးဘဲ ခနအစုတ်ခံပြီးမှ သီတာ့ပါစပ်နွေးနွေးထဲ အားရပါးရပီးလိုက်တာမို့ လရည်တွေကပါးစပ်နဲ့မဆံ့ လျှံကျလာရတယ်။ ဒါပေမဲ့သီတာကတော့ ရသလောက်မြိုချရင်း လီးတစ်ချောင်းလုံးကို ခနကလက်ညိုးတွေကိုစုပ်နေရပုံမျိုးကို စုပ်ပေးတာ။
ကိုညီက သိပ်ချစ်သွားတယ်၊ သူကပါးစပ်ထဲမှာပီးရတာကြိုက်ပေမဲ့ မသီတာကိုမပြောရဲသေး။ ခုမသီတာကလဲ သူ့ကိုကောင်းကောင်းထောင်းပေး၊ ယက်ပေးထားတဲ့ကိုညီ့ကိုသဒ္ဒါယိုဖိတ်ပီး လုပ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ နောက်ဆုံးတစ်စက်ထိအစုပ်မပြတ်တဲ့သီတာ့ပါးစပ်ထဲကလီးကိုဆွဲထုတ်ပီး သီတာကိုဖက် အနားကပ်လှဲရင်း
အွင် လူကိုလိုးပြီးမှ ဘာစိတ်မဆိုးဘူးလားလဲ
ခုနကလိုးခဲ့ခံခဲ့ကြပေမဲ့ ခုမှရည်းစားရသလိုသီတာရှက်သွားပီး မျက်လွှာလေးချတယ်။ အသဲယားသွားတဲ့ကိုညီက
နှုတ်ခမ်းလေးကိုဆွဲနမ်းရင်းဘေးတစောင်းဖြစ်နေတဲ့သီတာ့ဖင်ထွားအိအိကြီးကိုကိုင်ညှစ်နေမိတော့ ခုနကမပျော့တပျော့ဖြစ်နေတဲ့လီးကြီး ပြန်မာလာလို့ သီတာက အသာရုန်းထွက်ရင်း
ဟိတ် ကိုညီ နောက်ကျလို့မကောင်းဘူးနော်
နာရီကြည့်တော့၉နာရီခွဲတော့မယ်။ ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ် တရက်ကွက်ထဲနေတာဆိုတော့ သိပ်နောက်ကျလို့မကောင်း အတူပြန်သွားရင်ရှော့ရှိနိုင်သည်။ ဒါပေမဲ့ အခွင့်အရေးလေးရတုန်းမို့ သီတာ့ကိုဆွဲဖက်လိုက်ပီး
နောက်တွေ့ချင်သေးတယ်သီတာ၊ သီတာ့ကို ကိုယ်အရမ်းချစ်မိနေဘီ
အို ကိုညီချစ်တာကြီးကလဲ ကြောက်စရာကြီး
မကြောက်နဲ့သီတာ ဖြစ်နိုင်ရင်တသက်လုံးချစ်ချင်နေတာ ခုတောင် …
ဟိတ် ဟိတ် မတောင်နဲ့တော့ညီရယ် နောက်ကျနေဘီ နောက်တစ်ခါပေါ့နော် နော်
တကယ်နော်သီတာ နောက်လဲခုလိုထပ်ချစ်ချင် လိုးချင်သေးတယ် သီတာလေးရယ်
အွင်း တူတူပဲကိုညီရယ် အ အွင်း
အနမ်းရှည်တွေကိုအတင်းရပ်လိုက်ကြပြီး သီတာ့ကို တက်ဆီနဲ့ပြန်ခိုင်းပြီးကိုညီကတော့အဆင်ပြေသလိုပြန်မယ်ဆိုပြီးကျန်ခဲ့လေရဲ့။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့အားရပါးရရေချိုးပြီးကုတင်ပေါ်လှဲရင်း ဒီရက်ပိုင်းလေးအတွင်းမထင်မှတ်ဘဲကြုံခဲ့ရတဲ့ကာမအတွေ့အကြုံသစ်တွေနဲ့ စိတ်ရောကိုယ်ပါပျော်ဝင်ခဲ့ရသလို ခုမှတကယ်ကာမဂုဏ်ဆိုတာကိုခံစားရပြီး အလိုးခံတယ်အရသာကိုတကယ်ပေးစွမ်းခဲ့တဲ့ ကိုညီ့ အယုအယတွေကိုတသိမ့်သိမ့်ပြန်ခံစားရင်း အိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်။ အိမ်မက်ထဲမှာတော့ ကိုညီနဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့နောက်တစ်ခါများပေါ့ . . . . . .
ထန်နေတဲ့ သူနာပြုဆရာမ “”